ShweMinThar: August 2018
ဘဲကင်ရန် ပါဝင်ပစ္စည်များ *****
ဘဲသားပြုတ်ရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများ *****
ဘဲသား အစာသွပ်ရန်ပါဝင်ပစ္စည်းများ *****
ကြက်သွန်မြိတ် – စည်းဝက်
ဘဲသားနှပ်ထားရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများ *****
တရုတ်ဟင်းခတ် [chinese five-spice ]
♦ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ကြက်သွန်ဖြူ [garlic] ♦ ၁မွှာ
၂။ ပြီမှ ဘဲတောင်ပံ၊ ခေါင်း၊လည်ပင်းတို့ကို လှီးထုတ်လိုက်ပါ။
၃။ ထို့နောက် သန့်စင်ပြီသားဘဲသားကို ခြောက်သွေ့အောင်
ဘဲသားထဲ အစာသွပ်နည်း *****
၁။ ဘဲသားထဲ အစာသွပ်ရန်ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သော (ဂျင်း၊ Hoisine ဆော့၊ ကလဝေရွက်၊နတ်နတ်ပွင့်၊ ဂျင်း၊ သစ်ဂျပိုးမှုန့်၊
တရုတ်မဆလာ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ပဲငံပြာရည်၊ ကြက်သွန်မြိတ်) တို့ကိုသမအောင် ရောနုယ်လိုက်ပါ။
၂။ ပြီလျှင် အစာသွပ်ရန်ရောနုယ်ထားသည်များကို ဘဲအတွင်းသို့
၃။ အစာသွပ်ပြီလျှင် ဘဲအတွင်းပိုင်းအရေပြားကို ၀ါးတုတ်ပြီ လုံအောင်ပြန်ချုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ဆူလာလျှင် ဘဲပြုတ်ရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သော
(ရှာလကာရည်၊ Hoisin ဆော့၊ ကလဝေရွက်၊နာနတ်ပွင့်၊ ပျားရည်၊ လိမ္မော်သီး) တို့ကိုထည့်ပြီ ဆူအောင် ၄မိနစ်ခန့် တည်ပေးပါ။
၃။ ပြီနောက် ထိုဒယ်အိုးထဲဘဲအကောင်လိုက်ထည့်ပြီ ၁မိနစ်ခန့်
၁။ ဆော့ရည်အတွက် (ပျားရည်၊ ဆန်ဝိုင်၊ရှာလကာရည်၊ တရုတ်မဆလာ၊ ဆား၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဆီ) တို့ကို သမအောင်ရောမွှေပေးပါ။
၂။ ပြီမှ ဆော့ရည်များကို ဘဲတစ်ကောင်လုံးပေါ်သို့ လောင်းချပြီ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်အနည်းဆုံး ၈နာရီ (သို့) တစ်ညသိပ် ပေးရမှာပါ။
၃။ Oven နဲ့ကင်မည်ဆိုလျှင်၁၆၀ ဒီဂရီဖြင့် မိနစ် ၄၀ခန့်ကင်ပေးရမှာဖြစ်ပါသည်။
၄။ ဘဲကင် ရွှေညိုရောင်သန်းလာလျှင်နောက်ထပ် ၁၈၀ ဒီဂရီဖြင့်
မိနစ်၂၀ခန့် ဘဲအရေခွံကြွပ်သည်အထိ ကင်ပေးပါ။
၅။ အရသာရှိသော ပီကင်းဘဲကင်ကို ပန်ကိတ်၊ ဆော့ဖြင့် အရသာရှိစွာသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
ကြက်ကင် အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ ထဲက အိစံကတော့ အပြင်အသားကို ဘာအနံ့ မှမပါပဲ ဆားနှင့် ငရုတ်ကောင်းနဲ့ပဲကင်တာကို အကြိုက်ဆုံးပါ။ အခြား ကြက်ကင်နည်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲက အခုနည်းကတော့ အရိုးရှင်းဆုံးနှင့် စားလို့အကောင်းဆုံးနည်းပါ။ လုပ်စားကြည့်ရအောင်နော်။
၁။ CP ကြက် - ၈၀ သား - ၈၅ ကျပ်သား ဝန်းကျင် ကလီစာမပါသော ကြက်တကောင်
၂။ ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်းခွဲ
၃။ ငရုတ်ကောင်း - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
၄။ စပါးလင် - ၁ ချောင်း
၅။ ပဒဲကော - လက်တဆစ် (မရှိရင်မထည့်လဲရ)
၁။ ကြက်သားကို ရေခြောက်အောင်သုပ်ပါ။ စပါးလင်ကို ထုထားပါ။ ပဒဲကောကို ခပ်ထူထူလှီးထားပါ။
၂။ ပေါင်အရင်းနေရာမှာ ကပ်နေသော အရည်ခွံကိုဓါးဖြင့် အသာလေးဖြတ်ပါ။ (အသားပြတ်သွားအောင်ဖြတ်စရာမလိုပါ။)
၃။ ထို့နောက် ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းတို့ဖြင့် နေရာအနှံ့ သုပ်လိမ်းပေးပါ။ အတွင်းရင်အုပ်ထဲကိုလဲ ဆား၊ငရုတ်ကောင်းဖြင့်သုပ်လိမ်းပါ။ ရင်ခေါင်းအတွင်းထဲကို ထုထားသော စပါးလင်နှင့် ပဒဲကောကိုထည့်ပါ။ ကြက်ပေါင် ၂ချောင်းကိုပူးပြီး ကြိုးဖြင့်ချီပါ။ (မချီလဲရပါတယ်။) ပြီးလျှင်ဘာမှမအုပ်ပဲ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ အနည်းဆုံး ၂ နာရီလောက်ထားပါ။ (တညထားရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ အပြင်အရည်ခွံခြောက်သွားအောင်လို့ပါ။)
၄။ မကင်ခင် အကင်စက် oven ကို အပူချိန် ၄၅၀'F (230'C) မှာ ၁၀ မိနစ်လောက် ကြိုရ်ျအပူပေးထားပါ။ ထို့နောက် ၄၅၀'F (230'C) မှာ မိနစ် ၅၀ ထည့်ရ်ျ ကင်ပါ။ ကြက်ကင်ကင်လျှင် အကင်ဘန်းပေါ်မှာ သံစင်လိုမျိုးဟာကိုခံပြီးမှကင်ပါ။ ကြက်ကင်မှ အရည်များကျလာပါလိမ့်မည်။
၅။ မိနစ် ၅၀ နေလျှင် ကြက်ကင်မှကျလာသော အရည်များကို ကြက်ကင်များပြန်ရ်ျ သုပ်လိမ်းပေးပါ။ ထို့နောက် နောက်ထပ် ၁၀ မိနစ်ကင်ပါ။ ပြီးလျှင် အသားကို ဓါးချွန်ချွန်လေးဖြင့်ထိုးကြည့်ပါ။ အရည်ကြည်ကြည်များထွက်လာလျှင် ကြက်ကင်ရပါပြီ။ တကယ်လို့သွေးစများပါနေသေးလျှင် နောက်ထပ် ၁၀ မိနစ်ထပ်ကင်ပါ။ ကင်ပြီးလျှင် အကင်စက်ထဲမှာပဲ ၁၀ မိနစ်လောက် ထားပါ။ ထို့နောက် ကြိုက်နှစ်သက်ရာအရွယ်အစားလှီးရ်ျ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ကိုရီးယား ကြက်သား အစပ်ကင် (spicy grilled chicken)
ကိုရီးယား ကြက်သားအစပ်ကင်ကတော့ ကိုရီးယားအကင်တွေထဲမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ တခုပါပဲ။ အစပ်လေးပါတော့ မြန်မာအကြိုက်လေးပေါ့နော်။ မကပ်တဲ့ ဒယ်အိုးပေါ်မှလဲကင်လို့ ရပြီး လုပ်နည်းကတော့ မခက်ပဲလွယ်ကူလို့ လုပ်စားကြည့်ရအောင်နော်။
၁။ ကြက်သား အသားချည်း - ၂၅ ကျပ်သား (သို့ ) ၁ ပေါင်
၂။ ကိုရီးယား ငရုတ်သီးမှုန့် (korean red chili pepper flakes)- ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်းခွဲ (ကိုရီးယားငရုတ်သီးမှုန့် ကအစပ်မဟုတ်ပါ။ ကိုရီးယားငရုတ်သီးမှုန့် မရှိလျှင် အရောင်တင်မှုန့် ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။)
၃။ သကြား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းခွဲ
၄။ ပျားရည် - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
၅။ ဟင်းချက်ဆန်ဝိုင် - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
၆။ ပဲငံပြာရည်အကျဲ - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်းခွဲ
၇။ ကိုရီးယား ငရုတ်သီးအနှစ် (koread red chili pepper paste) - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
၈။ ပန်းသီးဖျော်ရည် (သို့ ) သစ်တော်သီးဖျော်ရည် (သို့ ) နာနတ်သီးဖျော်ရည် - ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
၉။ နှမ်းဆီမွှေး - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
၁၀။ ကြက်သွန်ဖြူ - ၂ မွှာ
၁၁။ ဂျင်း အနည်းငယ်
၁၂။ ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လေးပုံတပုံ
၁၃။ ကြက်သွန်နီ - တလုံးရဲ့ လေးပုံတပုံ
၁။ အသားကို ၁ စင်တီမီတာ အထူလောက်အသားလွှာလေးတွေလှီးထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီနှင့် ဂျင်းတို့ ကို နှုတ်နှတ်စဉ်းထားပါ။
၂။ ကြက်သားများကို နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားသော ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်းနှင့် အခြားပါဝင်သောပစ္စည်းများအားလုံးကိုထည့်ပြီး နယ်ပါ။ အနည်းဆုံး ၄ နာရီခန့် နှပ်ထားပါ။ (တညနှပ်လျှင် ပိုကောင်းပါတယ်။)
၃။ လှိုင်းတွန့် ပါသော ဒယ်အိုး (သို့ ) မကပ်သော ဒယ်အိုးကို ဆီသုတ်ရ်ျ နှပ်ထားသော အသားများကို ကင်ပါ။ အသားများကိုကင်ရာတွင် တလွှာဆီကင်ပါ။ အသားများအကုန်လုံးတခါထဲမထည့် အပြုံလုိုက်မထည့်ပါနဲ့ ။
ယိုးဒယား ကြက်ကင်ကတော့ လူအများစုကြိုက်တဲ့ အကင်တမျိုးပါ။ သူရဲ့ ယိုးဒယားငံပြာရည်နှင့် သကြားချိုချိုတို့ ရဲ့ အရသာ၊ စပါးလင်ပါတဲ့ အနံ့ တို့ ကြောင့် မွှေးပြီး အလွန်အရသာရှိပါတယ်။ ယိုးဒယားကြက်ကင်ကို ဗမာကြက်သေးသေး အကောင်လိုက်ကင်ရင်လဲ ရပါတယ်။ လုပ်စားကြည့်ရအောင်နော်။
၁။ ကြက်သား - ၅၀ သား (သို့ ) ၂ ပေါင်
၂။ ပျားရည် - ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
၃။ သကြား - ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
၄။ ယိုးဒယား ငံပြာရည် - ထမင်းစားဇွန်း ၃ ဇွန်း
၅။ ငရုတ်ကောင်း - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
၆။ ကြက်သွန်ဖြူ - ၆ မွှာ
၇။ စပါးလင် - ၁ ချောင်း
၈။ ဟင်းချက်ဆန်ဝိုင် - ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
၉။ သံပုရာသီး - ၁ စိတ်
၁၀။ ဂျင်း - လက်တဆစ်
၁။ ကြက်သားကို ရေဆေးရ်ျ သန့် စင်ထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်းနှင့် စပါးလင်ကို ညက်နေအောင်ထောင်းထားပါ။
၂။ ကြက်သားကို ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ စပါးလင်၊ ပျားရည်၊ သကြား၊ ယိုးဒယားငံပြာရည်၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ဟင်းချက်ဆန်ဝိုင်၊ သံပုရာသီးတစိတ်မှ သံပုရာရည် တို့ ဖြင့် နယ်ရ်ျ အနည်းဆုံး ၃ နာရီခန့် နှပ်ထားပါ။ (တညနှပ်လျှင် ပိုကောင်းပါတယ်။)
၃။ နှပ်ပြီးသား ကြက်သားများကို မီးပြင်းပြင်း ဖြင့် ၂ ဖက်လုံးကျက်အောင်ကင်ပါ။
၄။ အနံ့ မွှေးမွှေးနဲ့ အလွန်အရသာရှိတဲ့ ယိုးဒယား ကြက်ကင်ကို သုံးဆောင်နီုင်ပါပြီ။
ဒီနည်းကတော့ အိစံကို တရုတ်ကြီးတယောက်က သင်ပေးတဲ့နည်းလေးပါ။ သူ့ရဲ့ကြော်နည်းထဲမှာတော့ တရုတ်မဆလာတို့ ဟင်းချက်ဝိုင်တို့ထည့်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ သူကကြက်ဥလေးတွေကို အချပ်လိုက်ကြော်ပြီး အမျှင်လေးတွေလုပ်ပြီး ခေါက်ဆွဲထဲထည့်ထားပါတယ်။ တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းလို့လုပ်နည်းလေးကိုမျှဝေလိုက်တယ်နော်။ လုပ်စားကြည့်နော်။
၁။ ဂျုံခေါက်ဆွဲဖတ် - ၁ ပေါင် (သို့ ) ၂၅ ကျပ်သား
၂။ ၀က်သား (သို့ ) ကြက်သား - ၂၀ ကျပ်သား
၃။ ပါးပါးလှီးထားသော ဂေါ်ဖီထုပ် - တရုတ်ထမင်းစားပန်းကန်လုံး ၃ လုံးစာ
၄။ အချောင်းလိုက်လှီးထားသော မုန်လာဥနီ - အနည်းငယ်
၅။ ပဲငံပြာရည် အကျဲ - ထမင်းစားဇွန်း ၅ ဇွန်း
၆။ ပဲငံပြာရည် အပျစ် - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း နှင့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
၇။ ခရုဆီ - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း နှင့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
၈။ Lilly's လီလီ ကြက်သားမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ခွဲ
၉။ သကြား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ ဇွန်း
၁၀။ တရုတ်မဆလာ (five spices) - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
၁၁။ တရုတ် ဟင်းချက်ဝိုင် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
(Chinese cooking rice wine က ဟင်းချက်ဝိုင်ပါပဲ)
၁၂။ ဆီ - ထမင်းစားဇွန်း ၈ ဇွန်း
၁၃။ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက် - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း (အလွယ်တကူမရှိလျှင် ရိုးရိုးဆီကိုထည့်ပါ။)
၁၄။ ကြက်ပြုတ်ရည် (သို့ ) ရေ - ထမင်းစားဇွန်း ၄ ဇွန်း
၁၅။ ကြက်သွန်ဖြူ - ၅ မွှာ
၁၆။ ကြက်ဥ - ၄ လုံး
၁၇။ ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လေးပုံတပုံ
၁။ ကြက်ဥကို ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လေးပုံတပုံ၊ ရေထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်းထည့်ရ်ျ သမအောင်ခလောက်ထားပါ။
၂။ မကပ်သောဒယ်အိုးထဲကို ကြက်ဥလေးတွေ ပါးပါးလေးဖြစ်အောင်ထည့်ပြီး ကြော်ပါ။ (၅ ချပ်လောက်ရပါတယ်။) ကြော်ထားသော ကြက်ဥအပြားများကိုလိပ်ပြီး ပါးပါးလေးတွေလှီးပါ။ ခေါက်ဆွဲလေးတွေလိုအမျှင်လေးတွေရပါတယ်။
၃။ အသားကို အတုံးလေးတွေ လှီးပြီး ပဲငံပြာရည် အကျဲ ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ ပဲငံပြာရည် အပျစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ Lilly'sလီလီ ကြက်သားမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ ၀က်၊ ခရုဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ သကြား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ တရုတ်မဆလာ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဝက်၊ တရုတ်ဟင်းချက်ဝိုင် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဝက် တို့ ဖြင့် နယ်ရ်ျ ခဏ နှပ်ထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ ကိုတောက်တောက်ဆင်းထားပါ။
၄။ ခေါက်ဆွဲကို အစိုအသုံးပြုလျှင် ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူတဲ့ထဲကို ချက်ချင်းထည့်ပြီး ဆယ်ပါ။ ပြီးလျှင် ရေအေးဖြင့် ပြန်ဆေးပြီး ရေစစ်ပါ။ ရေစစ်ထားတုံးမှာ ခေါက်ဆွဲကို ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း ဖြင့် နယ်ရ်ျ ဖွထားပါ။
၅။ ရေစစ်ပြီးသော ခေါက်ဆွဲကို ပဲငံပြာရည် အကျဲ ထမင်းစားဇွန်း ၃ ဇွန်း၊ ပဲငံပြာရည် အပျစ် ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ သကြား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း၊ ခရုဆီ ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း၊လီလီ ကြက်သားမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ တရုတ်မဆလာ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဝက်၊ တရုတ်ဟင်းချက်ဝိုင် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဝက် တို့ ဖြင့်နယ်ထားပါ။
၆။ ဒယ်အိုးထဲကို ဆီ ထမင်းစားဇွန်း ၈ ဇွန်းထည့်ပြီး အပူပေးပါ။ ဆီပူလာလျှင် တောက်တောက်ဆင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူကို ထည့်ဆီသတ်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ အနံ့ မွှေးလာလျှင် အသားကို ထည့်ကြော်ပါ။ အသားများကျက်ပြီး အသားမှအရည်များ ထွက်လာလျှင် ပါးပါးလှီးထားသော ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့် မုန်လာဥနီကိုထည့်၊ ပဲငံပြာရည် ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း နှင့် သကြားလက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းတို့ ကိုထည့်ရ်ျ သမအောင်မွှေကြော်ပါ။
၇။ ပြီးလျှင် ချက်ချင်းပဲ ခေါက်ဆွဲများကိုထည့်ကြော်ပါ။
၈။ အသီးအနှံများနွမ်းလာလျှင် မီးဖိုပေါ်မှချခါနှီးတွင် ကျန်သော ကြက်ပြုတ်ရည် (သို့ ) ရေ ထမင်းစားဇွန်း ၄ ဇွန်းကို ထည့်ရ်ျ သမအောင် မွှေပြီးမီးဖုိုပေါ်မှချပါ။
၉။ အရသာ ကောင်းကောင်း အနံ့ မွှေးမွှေးနှင့် ခေါက်ဆွဲကြော် စုိုစိုလေးကို သုံးဆောင်နို်င်ပါပြီ။
#LillyMyanmar #Nomsg #Eisanshomemadeinspiration
Posted by Alex Aung at 1:21 AM No comments:
"A for Asus, B for Budget, Z for Zenfone"
ဒါက Max Pro (M1) အပေါ် ကျွန်တော့်အမြင်ကို အတိုချုပ်ဖွင့်ဆိုချက်ပေါ့။ ခါတိုင်းဆို "Price-to-Performance Ratio" ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ အသုံးများပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အဲဒီဝေါဟာရဟာ Asus အတွက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့ ၂သိန်း၁သောင်း၉ထောင် ဆိုတဲ့တန်ဖိုးအပေါ် ကျွန်တော်ပြန်ရခဲ့တဲ့ Experience လေးတွေကို Review နဲ့အတူ ပြောပြပေးသွားပါ့မယ်။
Notch မပါတဲ့ ရှေ့ဘက်၊ ဒေါင်လိုက် Camera နဲ့နောက်ကျော စတဲ့အပ်ကြောင်းထပ်နေတဲ့ပုံစံခွက်ထဲကနေ ဆွဲထုတ်ပေးခဲ့တာကတော့ သူ့ရဲ့ ကျောဘက်က Groove Line လေးပါ။ တခြားဖုန်းတွေမှာလို ဘောင်နဲ့ဆက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ခပ်ဝိုက်ဝိုက်ကလေး ချိုးဆင်းသွားတယ်။ (ပုံမှာဖော်ပြထားပါတယ်) ဒါကရုတ်တရက်မှာဆိုရင် ဘာမှမဟုတ်ဘူးထင်ရပေမယ့် ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ တခြား Mid-range တွေကနေ ကွဲပြားစေတဲ့အချက်မို့ အတော်လေးသဘောကျမိတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ ထူးမခြားနားပါပဲ။
Metal Body ကိုသုံးထားတယ်။ Fingerprint အောက်ဘက်မှာ Asus Logo ပါပြီး Camera နှစ်ခုကြားမှာ "Dual Camera" ဆိုတဲ့ စာရေးထိုးထားတယ်။ (မသိမှာစိုးလို့ထင်ရဲ့ 😏) Headphone Jack နဲ့ Speaker က အောက်ဘက်၊ Button တွေက ညာဘက်မှာရှိတယ်။ Tactile Sensation လေးတွေလည်း မဆိုးလှ။ Power Button ကို မတူညီတဲ့ Texture လေးထည့်ပေးထားတယ်။ ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ Dual Sim အပြင် SD Slot သပ်သပ် ပါဝင်တာပါ။ ဖုန်းရဲ့ Weight ကတော့ နဲနဲလေးတဲ့ဘက်ကို ရောက်တယ်။
ဒီတော့ Max Pro ဟာ Design ပိုင်းမှာ အနည်းငယ်ဆန်းသစ်ပြီး Mid Range ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ထူးမခြားနားတဲ့ Build Quality ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးလို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒီဖုန်းရဲ့ အားသာချက်တွေထဲက တစ်ချက်လို့ ဆိုရမှာပါ။ 6", 18:9, 1080P+ LCD Display က Brightness နဲနဲတင်ရုံနဲ့ အတော်လေးလင်းတာတွေ့ရတယ်။ Indoor Usage မှာဆို Daytime မှာ 20%, Night မှာ 10% လောက်နဲ့တင် အဆင်ပြေတယ်။ နေရောင်အောက်မှာဆိုလည်း အေးဆေးပါပဲ။ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ ဂိမ်းဆော့များသူတွေ အတော်အကြိုက်တွေ့လောက်မယ့် Display မျိုးပေါ့။
အားမရတာက သူ့ရဲ့ Color Accuracy ပါ။ Saturation များတဲ့ဘက်ရောက်ပြီး ချိန်ညှိစရာ Color Mode လဲမပါဝင်။ Display ကိုစိုက်ကြည့်နေသရွေ့ ပွင့်နေစေမယ့် Smart Screen On Mode လေးလည်း ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ Color ပိုင်းတစ်ချက်လောက်ကလွဲရင် ၂သိန်းဝန်းကျင်မှာ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ Display သုံးပေးထားတာက သဘောကျစရာပါ။
ဒီဖုန်းရဲ့ အားမရဆုံးအပိုင်းလို့ ဆိုရမှာပဲ။ (Camera ထက် ပိုသုံးဖြစ်တာဆိုတော့) သူ့ Fingerprint အထာက အဆန်းဗျ။ လက်နဲ့ခဏလေးထိပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ရင် ပွင့်တယ်။ ဆက်တိုက်ထိနေရင်ကျ မပွင့်တာများတယ်။ (သုံးတာကြာရင် ကျင့်သားရတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အဆင်မပြေတာတော့ အသေချာ) Unlock Speed ကလည်း သူ့ Level မှာ မဆိုစလောက်နှေးတယ်။
သူ့ထက်ပိုကြောင်တာက Face Unlock ပါ။ သူ့ရဲ့ Unlock ဖြစ်နိုင်ချေက 50:50 လောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်ထင်။ တစ်ခါတစ်လေ အလင်းရှိတဲ့အချိန်မှာတောင် Recognize မလုပ်တာတွေ့ရတယ်။ အားသာချက်ကတော့ ဖုန်းကိုဇောက်ထိုးကြည့်လဲ Unlock ဖြစ်တာပါ (ကဗျာဆရာ"ဇောက်ထိုး" မဟုတ်)
ဒါကြောင့် Overall Security ပိုင်းမှာတော့ နဲနဲ Impression အောက် မိတယ်။
Speaker ပိုင်းမှာတော့ Zenfone Max Pro က ကျွန်တော့်ကို ဒွိဟဖြစ်စေခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ Single Speaker က Mi 5X ထက် ပိုကျယ်၊ ပိုကြည်တဲ့အသံမျိုး ခံစားရစေတယ်။ အထူးသဖြင့် Vocal နဲ့ Bass ပိုင်းမှာ အတော်သိသာတယ်။ ဒါပေမယ့် Mids တွေမှာ အတော်အားနည်းတာတွေ့ရတယ်။ Sound Stage များတဲ့အခါမျိုးမှာ အသံတွေလုံးကုန်ပြီး High Volume မှာ Distortion လေးတွေ ကြားရတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် Volume ပိုင်းမှာ Mi 5X ကို သိမ်ငယ်သွားစေလောက်တဲ့ သူ့ရဲ့ Sound Quality ကိုတော့ မချီးကျူးပဲမနေနိုင်ပါ။
နားကြပ်တပ်ပြီး နားထောင်ချိန်မှာတော့ Audio Quality က သိပ်အဆင်မပြေလှ။ သူ့ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်က Volume အတော်တိုးတာပါ။ Vocal ပိုင်းကတော့ ကောင်းနေသေးပေမယ့် Bass တွေ Flat ဖြစ်တဲ့အပြင် Treble တွေကလဲ ကြားတယ် ဆိုရုံပဲရှိတော့တယ်။ အထူးသဖြင့် Mids တွေမှာ အသံခပ်မြင့်မြင့်တွေကို ကောင်းကောင်း Handle မလုပ်နိုင်ပဲ Sound Stage များလာလေလေ အသံရောလေလေပါပဲ။ Build in အနေနဲ့ Play Music ပဲပါပြီး Equilizer Mode တွေမတွေ့မိတာကလည်း သူ့ရဲ့ Sound Quality ကို ကျစေတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်မယ်ထင်ရဲ့။
ဒါပေမယ့် ထူးထူးခြားခြား သွားကောင်းနေတဲ့ တစ်နေရာတော့ရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ J-pop လို Light Song တွေမှာပါ။ Music ခပ်ပါးပါး၊ Bass ခပ်နဲနဲမို့လားပဲ နားထောင်ရ အတော်အရသာရှိတယ်။ ဒီတော့ Acoustic Song ကြိုက်တဲ့သူတွေတွက်တော့ အတော်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ Vibration ကတော့ တကယ် Mediocre ပါ။
ဒါကတော့ Asus ရဲ့ Main Selling Point တွေထဲက တစ်ချက်ပါပဲ။ Snapdragon 636 ကို ဒီဈေးနဲ့ရတာ Xiaomi နဲ့ Asus ပဲ ရှိဦးမယ်ထင်ရဲ့။ Testing တွေမှာ Performance Drop တစ်ချို့တွေ့ရပေမယ့် Real-life Usage မှာ အကုန်အဆင်ပြေတယ်။ 3GB RAM ပေမယ့် Pure Android ကျေးဇူးကြောင့်လားပဲ၊ Multitasking ကို ကောင်းကောင်း Handle လုပ်နိုင်တယ်။ Impress အဖြစ်ဆုံးက PUBG ကို "HD, High Setting" မှာ မထစ်မငေါ့ပဲဆော့နိုင်တာပါ။ ဒါဟာ ၂သိန်းဝန်းကျင်ဖုန်းတစ်လုံးကနေ ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မိတာထက် အများကြီးပိုကောင်းနေပါပြီ။
5,000 mAh Battery ဟာ Mid-range ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် လိုတာထက်ပိုတယ်တောင် ဆိုရမလားပဲ။ Zenfone Max Pro (M1) ကိုသုံးကြည့်သလောက်
1080p Video 1hr ကို 5-6%
Youtube (Wifi) 1hr ကို 8-9%
PUBG (HD, High, 4G) 1hr ကို 16-18% နဲ့
Dual Sim Stand-by 9hr ကို 2% စွန်းစွန်းပဲ ကုန်တာတွေ့ရတယ်။ (အပေါ်က Result တွေက 50% Brightness & Volume မှာ စမ်းခဲ့တာပါ။)
စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ Max Pro မှာ Fast Charge မပါတဲ့အပြင် Micro USB ကလည်း Type B ပါ။ ဒီတော့ 9% ကနေ စသွင်းကြည့်တဲ့အခါ အားဝင်နှုန်းက
1:30hr- 71% ပါ။ ဒီတော့ 0-100% ကို အားပြည့်ဖို့ဆိုရင် 3hr လောက် ကြာပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် ဂိမ်းရှယ်ဆော့တတ်သူတွေအတွက် Better Performance, Greater Battery Life ဆိုတဲ့အချက်နဲ့တင် Zenfone Max Pro ဟာ ဦးစားပေးရွေးချယ်စရာ ဖြစ်နေပါပြီ။
ဒီနေရာမှာ သဘောမကျတာက Camera ထက် Camera UI ပါ။ Max Pro ကို Gaming အသားပေးဆိုတာ ပေါ်လွင်စေချင်လို့လားမသိ၊ Camera ပိုင်းကို လိုတာထက် ဝိတ်လျှော့ထားသလို ခံစားရတယ်။ အထူးသဖြင့် Camera Icon တွေ Interface တွေက အတော်ပုံတုံးတယ်။ ဒီတော့ Camera Hardware ပိုင်းကရော?
ကျောဘက်မှာ 13MP f/2.2 Primary+ 5MP f/2.4 Depth Sensing Camera တွေ ပါဝင်တယ်။ Image Quality အနေနဲ့က Day Time မှာတော့ Quality သိပ်မဆိုးလှ၊ Color လေးတွေမှန်ပြီး Dynamic Range လေးလည်းကောင်းတယ်။ HDR On ပြီးရိုက်ရင်တော့ Color တွေပိုလွင်ပြီး ပိုလင်းတာတွေ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ Photo တွေက Zoom ဆွဲခံနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေမှာတော့မရှိ။
Low Light Photo တွေရိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အတော်လေးလက်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်၊ Hand shake ဒဏ်ကို Sensitive ဖြစ်လွန်းလို့ပါ။ Image Quality အနေနဲ့ Detail, Color တွေသိပ်မကောင်းလှပေမယ့် အလင်းရှိသရွေ့၊ လက်ငြိမ်သရွေ့တော့ Facebook တင်ဖို့လောက် အဆင်ပြေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်။ ဒီတော့ ပိုကောင်းတဲ့ Image Quality လိုချင်သူတွေအတွက် Root မလိုပဲ Google Camera ထည့်တဲ့နည်းလမ်းကို Zen Fans Myanmar Group ထဲမှာ တင်ပေးထားကြလို့ စမ်းချင်သူများ ဝင်ဖတ်ပြီး စမ်းကြပါလေ။
သူ့ရဲ့ Portrait Mode ကတော့ အဆိုးကြီးမဟုတ်သလို အကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်။ Depth Effect အနည်းအများကို ချိန်လို့ရတာတော့ အဆင်ပြေတယ်။ သူ့ရဲ့ 8MP Selfie Camera ကတော့ iPhone ပြီးရင် Natural အဆန်ဆုံးလို့တောင် ပြောရမယ်။ Beauty Level အမြင့်ဆုံးတင်ရိုက်တောင် ဝက်ခြံတွေ၊ ချွေးပေါက်တွေမြင်နေရတုန်း။ ဒီတော့ ကိုယ်တွေလို ရုပ်ဆိုးသူတွေတွက်တော့ အဆင်မပြေ 😅 Selfie Portrait ရိုက်လို့ရမယ်၊ Selfie Flashlight ပါတယ်။ ဒီတော့ နယ်ထရယ်ဘူးသီး မှကြိုက်သူတွေတွက်တော့ အတော်အဆင်ပြေမှာပါ။
ဒီဈေးနဲ့Video ပိုင်းမှာ 4K ထိရိုက်လို့ရတာ အတော်လေး Impress ဖြစ်စရာပါ။ (4K တောင် DCI mode နဲ့ UHD mode ဆိုပြီး ၂မျိုးပါသေး)
ဒီတော့ Camera ကို Hardware အရ သိပ်မမျှော်လင့်ပေမယ့် Camera UI ပိုင်းကိုတော့ ဒီထက်ပိုကောင်းဖို့ မျှော်လင့်မိတယ်။
Pure Android အသည်းစွဲ Fan တွေကတော့ ဒီဖုန်းကို သေချာပေါက် သဘောတွေ့ကြမယ်ထင်ရဲ့။ Pure ဆိုပေမယ့် Max Pro ဟာ Android ONE ဖုန်းတစ်လုံးမဟုတ်ပဲ Asus ကနေ Tweak တစ်ချို့ထပ်ဖြည့်ထားတဲ့ Pure Android ပေါ့။ ပိုမိုက်တာက ခုနောက်ပိုင်းမှာ Zawgyi Font ကို System Update နဲ့အတူ Support ပေးလိုက်ပြီ။ ဒီတော့ Gmail, Chrome မရွေး Zawgyi Font အတွက်ပူစရာမလိုတော့။ Pure ဆိုပေမယ့် နဲနဲ Lag တာ Delay ဖြစ်တာလေးတွေတော့ တွေ့ရတယ်။
သဘောကျတာကတော့ Multitasking မှာ Apps အတော်များများက နဂိုထွက်ထားခဲ့နေရာကနေ ပြန် Run နိုင်တာပါပဲ။ ဒါက UI အုပ်တဲ့ Android တွေထက် အားသာချက်လို့ပြောရမလားပဲ။ ပြီးတော့ Screen on, off Gesture လေးတွေ၊ Oppo မှာလို Screen ပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတစ်ခုစီနဲ့ Camera, Message စသည်ဖြင့် တန်းဖွင့်လို့ရတာက UX ပိုင်းမှာ အတော်လေးသဘောကျစေတဲ့အချက်တွေပါ။
ဒီတော့ Asus ရဲ့ Zenfone Max Pro (M 1) ဟာ သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ချို့ကြောင့် ၂သိန်းဝန်းကျင်မှာ အကောင်းဆုံးဖုန်းတစ်လုံးလို့ သတ်မှတ်ရခက်ပေမယ့် "Price-to-Performance Ratio" အရမှာတော့ "အတန်ဆုံး" ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောရင် မမှားလောက်ပါဘူး။ ဒီ Level မှာ အကောင်းစား Display, အကောင်းစား Performance, အမိုက်စား Battery ဆိုတဲ့ အားသာချက်တွေ သူ့မှာရှိနေတယ်။ ဆိုတော့ကာ Pure Android Lover တွေ၊ ရုပ်ရှင်အကြည့်များ၊ ဂိမ်းရှယ်ဆော့ချင်၊ Battery ရှယ်ခံတာမှ လိုချင်သူတွေတွက် Asus ရဲ့ Zenfone Max Pro (M1) ဟာ အမှန်ကန်ဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်မှာ အသေချာပါပဲ။
#planetx #asus #zenfone #max #pro #m1
Posted by Alex Aung at 2:33 AM No comments:
တစ်ခါတုန်းက ဆရာတော်အရှင်ဇနကာဘိဝံသကို ထီးဆောင်းမောင်ရှင်ဆိုတဲ့ ကလောင်ရှင်တစ်ယောက်က မဟုတ်မဟတ်လုပ်ဇာတ်တွေခင်းပြီး နဝဒေးမဂ္ဂဇင်းမှာ ဝေဖန်ပုတ်ခတ်သရော်ဆောင်းပါးရေးပါတယ်။ ဆရာတော့်မကောင်းကြောင်းရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးပါတဲ့လမှာ အဲဒီနဝဒေးမဂ္ဂဇင်းဟာ ရောင်းမလောက်အောင် ကုန်သွားပါသတဲ့။ ဒီဆောင်းပါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာတော့် ဒကာ ဒကာမတွေက မခံနိုင်လွန်းလို့ ပြန်ရေးမယ်လို့ ဆရာတော့်ကို လျှောက်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဆရာတော်က ခွင့်မပြုပါဘူး။ သည်းခံကြဖို့ ဆုံးမပြီး “ လောကမှာ ရှိတတ်စမြဲပါပဲ” တဲ့။ နောက်ဆက်ပြီး “ ဘဝသံသရာထဲမှာ တို့တစ်တွေနဲ့ သူတို့တစ်တွေဟာ ဘယ်လိုဇာတ်ကောင်တွေအဖြစ်နဲ့ ကသွားကြရမယ် မသိနိုင်သေးဘူး” တဲ့။ နောက်ဆက်တွဲ ထူးခြားတာကတော့ ထီးဆောင်းမောင်ရှင်ဆိုတဲ့ ကလောင်ရှင်ဟာ ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ တပည့်ကြီးတစ်ပါး ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။
​ ( တစ်ဘဝသာသနာ စာမျက်နှာ ၂၆၇။ အရှင်ဃောသိတ )
က်ကလေးဖတ်ပြီး ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။ ဆရာတော့်လို သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ကြီးမားရုံမက အထူးသဖြင့် ပရိယတ်နယ်ပယ်မှာ ကျော်ကြားလှတဲ့ ဆရာတော် တစ်ပါးကို ဝေဖန် ပုတ်ခတ် ဆောင်းပါးရေးတယ် ဆိုတော့ ဘေးကနေ နယ်ပယ်စုံအတွေးနဲ့ တွေးနေမိပါတယ်။ အဲဒီအထဲက “ထင်ရှားရတာလည်း မသက်သာလှပါလား” နောက်အတွေးတစ်ခုကတော့ “တကယ်လို့များ အသက်ထွက်ခါနီးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ကဲ့ရဲ့မှုလေး ဖြတ်ကနဲပြန်ပေါ်လာလိုက်ရင်”ဆိုတဲ့စိုးရိမ်အတွေးပါ။တဒင်္ဂစိတ်ခံစားမှုကြောင့်ရေးဖြစ်သွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တော့လည်း စိတ်မကောင်းတွေဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပါ။
ငယ်ရွယ်တုန်းမှာ လောကရေးရာအရကော ဓမ္မရေးရာအရကော ဂုဏ်ရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်, ရဟန်းပဲဖြစ်ဖြစ်, တစ်ဦးဦး တစ်ပါးပါးကို ကဲ့ရဲ့ခဲ့မယ်။ ဒီလိုနဲ့ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ အလုပ်ကလည်းအနားယူ၊ အရွယ်ညောင်းလာတဲ့အားလျှော်စွာ ရိပ်သာဝင် တရားအားထုတ်မယ်၊ တရားထိုင်တဲ့အခါ ငယ်ငယ်က ကဲ့ရဲ့ခဲ့တာကို အတွေးအာရုံမှာ ပြန်ပြန်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ နောင်တရ ယူကျုံးမရ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ကဲ့ရဲ့ခဲ့တဲ့သူကလည်း လူ့လောကမှာမရှိတော့ပါဘူး၊ သေသွားပါပြီ။ ဒါဆို တရားရှုမှတ်ရတာ အနှောင့်အယှက်တစ်ခု ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ တရားမှတ်လို့ မကောင်းတော့သလို၊ တရားလည်း မတက်တော့ပါဘူး။ သက်တမ်းကြည့်တော့လည်း နေရမယ့်လက်ကျန်အချိန်ကနည်းနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် အသက်ကြီးမှ နောင်တရမယ့် ကဲ့ရဲ့မှုမျိုးကို မလုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါတွေက တရားထိုင်ရင် တွေ့ရတတ်တဲ့သဘောသဘာဝလေးတွေပါ။
ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဘဝမှာ တစ်ဖက်က အောင်မြင်ကျော်ကြားသလောက် တစ်ဖက်မှာလည်း လောကဓံမျိုးစုံနဲ့ ကြုံရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာတော်က လောကဓံတွေကို ဣနြေ္ဒရရပဲ ဖြတ်သန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော့်နေရာမှာ သာမန်ရဟန်းတစ်ပါးသာဆိုရင် ဖြတ်သန်းရ ခက်ခဲနိုင်သလို ကိုယ့်ဘက်က မှန်ဦးတော့ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး ဘဝတောင် ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ထင်ရှားကျော်ကြားမှုရဲ့ သင်္ကေတအကျိုးဆက်တွေပါပဲ။ မထင်ရှားရင်တော့ ကဲ့ရဲ့ခံရစရာလည်း အကြောင်း မရှိပါဘူး။
​ လောကဓံဆိုတာ လောကဓမ္မဆိုတဲ့ပါဠိကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမည်ပါ။ လောကရယ်၊ ဓမ္မရယ် နှစ်ပုဒ်ပါ။ လောကအရ သတ္တလောကဆိုတဲ့ သတ္တဝါအပေါင်းကို ကောက်ရပါမယ်။ ဓမ္မက သဘာဝတရား။ ဒီတော့ လောကဓံဆိုတာ သတ္တဝါတွေမှာ မလွှဲမရှောင်သာဘဲ အမြဲထိတွေ့ ခံစားနေရတဲ့သဘာဝတရားတွေလို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပြပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားက လောကဓံနဲ့ပတ်သက်လို့ အဂုင်္တ္တိုရ်ပါဠိတော်မှာ လောကဓမ္မသုတ်ဆိုပြီး အကျဉ်းတစ်သုတ်၊ အကျယ်တစ်သုတ် ဟောပြပေးထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လောကဓံတရားတွေ ကြုံလာရတဲ့အခါ ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ်ဆိုတာ ဟောပြထားတဲ့ သုတ္တန်ပါ။
လောကဓံရှစ်ပါးကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့ လာဘော၊ အလာဘော၊ ယသော၊ အယသော၊ နိန္ဒာ၊ ပသံသာ၊ သုခံ၊ ဒုကံ္ခပါ။ ဒီနေရာမှာ အလာဘအရ လာဘ်မရခြင်းအပြင် ရပြီးသား ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်ဆီး ပျောက်ဆုံးသွားရင်လည်း အလာဘပါပဲတဲ့။ အယသ အခြံအရံမဲ့ခြင်းဆိုတာလည်း အခြံအရံမရှိတာတင်မကဘဲ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက် ခင်ပွန်း၊ ဇနီး၊ သားသမီး၊ မိဘ၊ မိတ်ဆွေ၊ အခြွေအရံတွေ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ကွေကွင်းသွားရင်လည်း အယသ လောကဓံဖြစ်သွားပါတယ်။
သုခအရ ကိုယ်၏ ချမ်းသာခြင်း၊ စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်းကိုကောက်ယူရပါမယ်၊ ဒုက္ခအရ ကိုယ်၏ ဆင်းရဲခြင်း၊ စိတ်၏ ဆင်းရဲခြင်းကို ကောက်ယူရပါမယ်။
​ မြတ်စွာဘုရားရှင်က ကောင်းတဲ့လောကဓံ(၄)ပါးပဲကြုံကြုံ၊ မကောင်းတဲ့ လောကဓံ (၄)ပါးပဲကြုံကြုံ -
ဝိပရိဏာမဓမ္မော- ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ သဘောရှိပါတကား။
အဲဒီသုံးချက်နဲ့ ဆင်ခြင်ဖို့ ဟောပြထားပါတယ်။ ဥပမာ- ကိုယ့်ရဲ့ ပစ္စည်း၊ လာဘ်လာဘတွေကို ကြည့်ပြီး အနိစ္စော မမြဲပါတကား၊ ဒုက္ခော ဆင်းရဲပါတကား။ ဝိပရိဏာမဓမ္မော ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘော ရှိပါတကားလို့ ဆင်ခြင်ရပါမယ်။ မမြဲတဲ့သဘောရယ်၊ ဆင်းရဲတဲ့သဘောရယ်၊ ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရယ်ပါ။ ပစ္စည်း၊ ဥစ္စာတွေကလည်း မမြဲပါဘူး၊ ရန်သူမျိုး (၅)ပါးနဲ့ အချိန်မရွေးပျက်ဆီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေကြောင့်ပဲ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြရပါတယ်၊ တစ်ခါတရံ ကိုယ့်ပစ္စည်းကပဲ ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပြန်ပေးသွားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ ကိုယ့်ဟာဆိုပေမယ့် နောက်နေ့ကျ သူများဟာဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်တဲ့။
ဒီလိုပါပဲ။ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာလည်း အနိစ္စော ဒုက္ခော ဝိပရိဏာမဓမ္မောလို့ ဆင်ခြင်ပါတဲ့။ နောက် အခြံအရံတွေကြည့်ပြီး ဆင်ခြင်ရပါမယ်။ အခြံအရံတွေဆိုတာလည်း မမြဲပါဘူး။ ဥပမာ- ကိုယ်က ရာထူးကြီးကြီး အရာတစ်ခုကို ရနေမယ်။ ဒါဆို ကိုယ့်အနားမှာ အခြံအရံတွေ များနေမှာပါ။ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ရာထူးက အရာကျသွားတာနဲ့ အဲဒီအခြံအရံတွေက ကိုယ့်အနားက ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကြိုတင်ဆင်ခြင်ထားတော့ ဖြေသာပါတယ်။ နောက်ဆုံး ကိုယ့်လင်၊ ကိုယ့်ဇနီး၊ ကိုယ့်သားသမီး၊ ကိုယ့်မိဘ စသည်တွေကအစ မမြဲပါဘူး။ ရှင်ကွဲမကွဲရင်တောင် တစ်နေ့မှာတော့ သေကွဲကွဲရမှာပါ။ တကယ်တော့ ဘဝမှာ အချစ်ရဆုံးလို့ ဆိုရမယ့် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်ကလည်း မမြဲပါဘူး။ အခြံအရံတွေမဲ့သွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲ ဆင်ခြင်ရပါမယ်။
မမြဲတဲ့သဘောတရားတွေကို မမြဲတဲ့သဘောတရားအတိုင်း ကြိုသိထားတော့ ဘဝခရီးအတွက် သက်သာရာ ရစေတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
နောက်တစ်တွဲက နိန္ဒာ၊ ပသံသာ။ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်းပါ။ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်းတွေ ကြုံရတဲ့အခါမှာလည်း အနိစ္စော၊ ဒုက္ခော၊ ဝိပရိဏာမဓမ္မော ဒီသုံးချက်နဲ့ပဲ ဆင်ခြင်ရမှာပါ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်အလိုကျဆိုရင် ချီးမွမ်းခံရရင်လည်း ဆင်ခြင်ရပါမယ်။ ကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းနေတဲ့အခါ အနိစ္စော- ဒုက္ခော- ဝိပရိဏာမဓမ္မောလို့ စိတ်ထဲကဆင်ခြင်နေရပါမယ်၊ ဒီနေ့ချီးမွမ်းနေပေမယ့် နောင်တချိန်ကျရင် အဲဒီချီးမွမ်းတဲ့သူတွေကပဲ ကိုယ့်ကိုပြန်ကဲ့ရဲ့ချင်ကဲ့ရဲ့နေတတ်ပါတယ်။ မမြဲတဲ့လောကဓံတရားတွေကို တရားနဲ့ကြိုနှလုံးသွင်းထားတဲ့သဘောပါ။
ဆင်ခြင်နေတဲ့အချိန်မှာ ဆင်ခြင်ခြင်းကုသိုလ်တွေဖြစ်နေသလို နောင်အနာဂတ်အတွက်လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။ ချီးမွမ်းတာကိုတော့ လူတိုင်း ကြိုက်ကြပါတယ်။ ကဲ့ရဲ့တာကျတော့ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် မကြိုက်ကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ထင်ရှားတဲ့သူတွေဆိုရင် ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်းတွေက သူများထက် ပိုခံရတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ- အနုပညာရှင်တစ်ယောက် အိမ်ထောင်ကွဲသွားတယ်ဆိုပါစို့။ ပရိသတ်အာရုံစိုက်မှုကို သူများထက် ပိုခံရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကွဲတာကတော့ အရပ်ထဲမှာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တွေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တွေကျတော့ ပိုအာရုံစိုက်ခံရပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကွဲလို့ ခံစားရတာက တစ်မျိုး၊ ကဲ့ရဲ့လို့ ခံစားရတာက တစ်မျိုး၊ ပိုလို့တောင် ခံစားရပါသေးတယ်။ တရားသဘောနဲ့ နှလုံးမသွင်းနိုင်ရင် အခံရခက်ပါတယ်။ ဒါတွေကထင်ရှားရခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ်တွေပါ။
ကိုယ်ကထင်ရှားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ထင်ရှားခြင်းကြောင့်ရလာမယ့် အကျိုးအပြစ်အတွဲကို ကြိုတွေးဆထားရမှာပါ။ တစ်ခါတလေတော့လည်းဘဝကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနေတာလေးက ဘဝတစ်ခုအတွက် ပိုအေးချမ်းလှပါတယ်။
နောက်ဆုံး တစ်တွဲက သုခ၊ ဒုက္ခ။ ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ဆင်းရဲခြင်း စိတ်၏ဆင်းရဲခြင်းပါ။ ဒီတော့ စိတ်ချမ်းသာလည်း ဆင်ခြင်ရမှာပါပဲ။ စိတ်ဆင်းရဲလည်း ဆင်ခြင်ရမှာပါပဲ။ အမြဲတမ်း စိတ်ချမ်းသာ မနေနိုင်သလို၊ အမြဲတမ်းလည်း စိတ်ဆင်းရဲမနေပါဘူး။ ဒီတော့ စိတ်ချမ်းသာနေရင်လည်း ဒီသုံးချက်နဲ့ဆင်ခြင်ရပါမယ်။
စိတ်ဆင်းရဲနေရင်လည်း ဒီသုံးချက်နဲ့ဆင်ခြင်ရပါမယ်။ မျက်လုံးလေးမှိတ်ဆင်ခြင်ရင် အာရုံစိုက်မှုပိုရပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားက လောကဓံရှစ်ပါးထဲက ကောင်းတာပဲကြုံကြုံ၊ ဆိုးတာပဲကြုံကြုံ အနိစ္စော၊ ဒုက္ခော၊ ဝိပရိဏာမဓမ္မော လို့ သုံးချက်နဲ့ ဆင်ခြင်ပါလို့ မိန့်မှာထားပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားက ဆင်ခြင်ပါဆိုတော့လည်း ဆင်ခြင်လိုက်ရုံပါပဲ။ သိပ်လည်းမခက်လှပါဘူး။ ဆင်ခြင်ပုံ ပါဠိမြန်မာလေးကလည်း ဆိုလို့ ဆင်ခြင်လို့ ကောင်းတဲ့ ပါဠိမြန်မာလေးပါ။ ဆင်ခြင်ပြီးရင်လည်း ကျေနပ်မှု တစ်ခုခုတော့ အနည်းနဲ့ အများ ရသွားကြတာ များပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို ကြည်ညိုချစ်ခင်စိတ်နဲ့ ဆင်ခြင်လိုက်ရုံပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပါရမီမတူတဲ့အတွက် သဘောပေါက်သိသွားပုံခြင်း၊ ဥာဏ်အလင်းပွင့်သွားပုံခြင်း တူမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ- ဆယ်ယောက်ဆင်ခြင်ရင် ဆယ်ယောက်လုံး သဘောပေါက်သွားပုံခြင်း တူညီညီမျှမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပါရမီဥာဏ်ရည် အနိမ့်အမြင့် အားလျှော်စွာ သဘောပေါက်မှု အနိမ့်အမြင့်လည်း ကွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ တချို့က (၂၀)ရာခိုင်နှုန်း၊ တချို့က (၃၀)ရာခိုင်နှုန်း၊ တချို့က (၄၀)ရာခိုင်နှုန်း စသည်ဖြင့် သဘောပေါက်မှု ဥာဏ်အလင်းပွင့်မှု ကွဲသွားနိုင်ပါတယ်။
သဘောပေါက်မှုရာခိုင်နှုန်းနည်းလို့လည်း ဘာမှအားငယ်စရာမလိုပါဘူး။ ဆင်ခြင်စရာရှိတာ ဆင်ခြင်ရမှာပါပဲ။ ဆင်ခြင်ရင်း ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ သဘောပေါက်မှုတွေက တစ်ဆင့်ထက်တစ်ဆင့် မြင့်မြင့်လာမှာပါ။ သဘောပေါက်မှု ဥာဏ်ရည်က တန့်မနေပါဘူး။ ဒီတစ်ခါ ဆင်ခြင်လို့ (၂၀)ရာခိုင်နှုန်း သဘောပေါက်ရင် နောက်တစ်ခါ ဆင်ခြင်တဲ့အခါ (၂၁)ရာခိုင်နှုန်း သဘောပေါက်လာမှာပါ။ နောက်တစ်ခါ ဆင်ခြင်တဲ့အခါ (၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅) စသည်ဖြင့် သဘောပေါက်မှု ဥာဏ်အလင်းပွင့်မှု ရာခိုင်နှုန်းမြင့်မြင့်လာမှာပါ။ ဆင်ခြင်ရင်း ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ သဘောပေါက်မှု ဥာဏ်အလင်းပွင့်မှုများလာတာနဲ့အမျှ ဘဝအတွက် သက်သက်သာသာရှိလာတော့မှာပါ။
ဆင်ခြင်တာ ဝိပဿနာမဟုတ်သေးပေမယ့် ဝိပဿနာအတွက် အထောက်အပံ့ကောင်းတွေ ဖြစ်နေသလို သံသရာခရီးအတွက်လည်း ပါရမီတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဇာတ်တော်တွေထဲမှာတော့ ဆင်ခြင်မှုက တစ်ဆင့် ဝိပဿနာကူးသွားပြီး တရားထူး ရသွားကြတဲ့ သာဓကဝတ္ထုတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ ဆင်ခြင်မှုဟာ ဒီဘဝအတွက် သက်သာတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုတွေကို ရနိုင်သလို နောင်သံသရာအတွက်လည်း တရားထူး ရဖို့အတွက် အထောက်အပံ့ကောင်းတွေ ရသွားမှာပါ။ ဒါတွေကတော့ ဆင်ခြင်ပြီး လောကဓံကို ဖြတ်ကျော်တာပါ။ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားထားတဲ့အတိုင်း စနစ်တကျ ဝိပဿနာရှုမှတ်နေတဲ့ ယောဂီဟာ အဲဒီလောကဓံတွေကို ရှုမှတ်ပြီးတော့လည်း အတော်အတန် သည်းခံနိုင်ပါတယ်လုိ့ မိန့်ထားသလို ရှုမှတ်ရင်း သမာဓိဥာဏ်တွေ ရင့်သန်ပြီး သင်္ခါရုပေက္ခာဥာဏ်အဆင့်အထိ ရောက်သွားရင်တော့ လောကဓံ အကောင်းကော အဆိုးကော သည်းခံနိုင်သွားပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
​ သင်္ခါရုပေက္ခာဥာဏ်မှာ ဂုဏ်ရည်သုံးခု ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ဂုဏ်ရည်သုံးခုကို ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက အများနားလည်လွယ်အောင် ဆောင်ပုဒ်လေးနဲ့ ပြထားပါတယ်။
​ကြောက် နှစ်သက်ခြင်း၊ ကင်းရှင်းပေသည်၊
​ သင်္ခါရုပေက္ခာဥာဏ်ရောက်သွားတဲ့ ယောဂီဟာ -
၁။ အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အာရုံတွေနဲ့ တွေ့ကြုံရပေမယ့် ကြောက်ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။ အလွန် နှစ်သက်စရာ အာရုံတွေနဲ့ တွေ့ရပေမယ့်လည်း နှစ်သက်ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။
၂။ ချမ်းသာနဲ့တွေ့ရလို့လည်း စိတ်တက်ကြွမှုတွေ မရှိတော့သလို ဆင်းရဲနဲ့တွေ့ရလို့လည်း စိတ်နှလုံးမသာယာမှုတွေ မရှိတော့ပါဘူး။ ချမ်းသာနဲ့ ဆင်းရဲကို အညီအမျှ ရှုလို့ရနေပါတယ်။
၃။ တရားရှုမှတ်တဲ့အခါ ကြောင့်ကြစိုက်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ရှုမှတ်ရတာ အလွန် လွယ်ကူနေတတ်ပါတယ်။ မှတ်စရာအာရုံနဲ့ မှတ်သိစိတ်တို့ အလိုလို မှတ်နေရသလို လွယ်လွယ်ကူကူ ရှုမှတ်နေရတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေက သင်္ခါရုပေက္ခာဥာဏ်ရဲ့ဂုဏ်ရည်သုံးခုပါ။
ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ ဝိပဿနာတရားအားထုတ်လို့ သင်္ခါရုပေက္ခာဥာဏ် ရောက်သွားရင်တော့ လောကဓံအဆိုးတွေကို သည်းခံသွားနိုင်ပြီလို့ အသေအချာ မိန့်မှာထားတယ်။ သင်္ခါရုပေက္ခာဥာဏ်အထိရောက်အောင် အားထုတ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
​ ဒါပေမဲ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပါရမီမတူတဲ့အတွက် ရှုမှတ်မှုလမ်းကြောင်းကို မလျှောက်နိုင်သေးရင်တောင် လွယ်ကူတဲ့ သိပ်မခက်လှတဲ့ ဆင်ခြင်မှု လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုတော့ ဆင်ခြင်ရင်းကျင့်ရမှာပါ။
ဘာပဲပြောပြောလေ မြတ်စွာဘုရားက လောကဓံအကောင်းပဲကြုံကြုံ အဆိုးပဲကြုံကြုံ အနိစ္စော- ဒုက္ခော- ဝိပရိဏာမဓမ္မော လို့ သုံးချက်နဲ့ ဆင်ခြင်ပါဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားကို ကြည်ညိုချစ်ခင်စိတ်နဲ့ ဆင်ခြင်လိုက်ဖို့ပါပဲလေ။
ကမ္ဘာမကြေဆိုသော စာသားကို စာရေးသူကိုယ့်ဘာသာ အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားနေမိတာ မကြာခနဖြစ်သည် ။ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာမကြေ မြန်မာပြေ(ပြည်) ဆိုသော စာသားကိုဖြစ်သည် ။ နိုင်ငံတော်သီချင်းကိုဆိုတိုင်း ထိုနေရာအရောက်တွင်ကျွန်တော်တို့သည် အသံကိုမြှင့်၍ အားနှင့်မာန်နှင့်သီဆိုကြသည် ။ ဆိုလို့ လဲကောင်းသည် ။ အဓိပါယ်လဲ ရှိသည် ။ မူရင်းအဓိပါယ်ကတော့ ကမ္ဘာမြေကြီးတည်၇ှိနေသရွေ့မြန်မာပြည်လဲတည်ရှိနေမည်ဟု ဆိုလိုပုံရသည် ။ သို့ သော် ကျွန်တော်ကတော့ ထိုသို့ မခံစားရ ။ ကမ္ဘာမကြေဆိုသောစာသားမှာ နိမိတ်မကောင်းဟုသာခံစားရသည် ။ နာကျည်းမုန်းတီးမှုတွေကိုသာဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုလည်းထင်မြင်မိသည် ။ ကမ္ဘာမကြေ-မြန်မာပြည် ဆိုသော စကား ကို အခြားတဖက်မှ နားလည်နေမိသည် ။ ကျွန်တော်နားလည်သော ကမ္ဘာမကြေမှာ အတိတ်ကဖြစ်ရပ်တွေကိုမကြေမနပ်ဖြင့်ကြိမ်းဝါးပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည် ။ အေး ကမ္ဘာကြေတောင် မင်းကိုမကြေဘူးကွ ဟူသော သဘောမျိုးကိုဆောင်သည့် စကားဟုသာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ခံစားရသည် ။ မြန်မာပြည်ကြီးသည်လည်း ကမ္ဘာကြေတောင် အတိတ်ကအကြောင်းတွေကို ကြေနိုင်မည်မဟုတ် ဟူသော သဘောကို စာသား၏အတွင်းသဘောတွင်လှစ်ဟဖော်ပြနေသည်ဟုသာထင်ပါသည် ။ထို့ ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ သည် အတိတ်ဖြစ်ရပ်ဆိုးများမှ ရုန်းထနိုင်ခြင်းမရှိပဲ ၊အတိတ်က နာကျည်းခဲ့ရသည်များ ၊ ခံခဲ့ရသည်များကိုသာ ပြန်လည်တွေးမိကာ ကမ္ဘာမကြေဟုရွတ်ဆိုနေရသည် ။ ထိုသို့ အတိတ်ကိုအခဲမကြေသည့် စာသားများကိုရွတ်ဆိုရင်း အခဲမကြေစရာ ဖြစ်ရပ်ဆိုးများက ထပ်ကာထပ်ကာဖြစ်နေရပြန်သည် ။ ထိုအခါ ကျွန်တော်တို့သည် အတိတ်ကမ္ဘာထဲမှာပဲ တရစ်ဝဲ၀ဲနှင့်လှည့်နေကာ ကောင်းမွန်သာယာသော အနာဂါတ်ဆီသို့ ခြေဦးမလှည့်နိုင်တော့ ပဲ အတိတ်ဆိုသည့် ၀င်္ကပါထဲမှာပဲပိတ်မိနေတော့သည် ။
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကာလအတွင်း တေးရေးနိုင်မြန်မာ ၁၉၈၈ က ရေးစပ်ခဲ့သောသီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိသည် ။ထိုသီချင်းတွင်လည်း ဤသို့ပါရှိသည် ။
“ကမ္ဘာမကြေဘူး …… ငါတို့သွေးနဲ့ရေးခဲ့ကြတဲ့မော်ကွန်းတွေ “
ဤသီချင်းစာသားတွင်လည်း ကမ္ဘာမကြေဘူးဆိုသောစာသား၏အဓိပါယ်မှာ ကမ္ဘာ ကုန်သည်အထိမကြေဘူးဆိုသော အဓိပါယ်ဖြစ်သည် ။ ကမ္ဘာကြီးပျက်စီးသည့်အထိ မြန်မာနိုင်ငံတည်ပါစေဆိုသော အဓိပါယ်မျိုးမဟုတ်ပေ ။ ဤနေရာ၌ သီချင်းကိုကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းဝေဖန်ခြင်းမဟုတ်သလို ၊ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကို ဝေဖန်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပေ ။ အဓိကပြောလိုရင်းမှာ ကမ္ဘာမကြေဆိုသော စကားလုံး၏အဓိပါယ်ဖြစ်သည် ။ ကမ္ဘာမကြေဆိုသည့်အဓိပါယ်မှာ ကမ္ဘာကြေသော်လည်း ဥဒါန်းမကြေ ဆိုသော ခွင့်မလွှတ်သောသဘောဆောင်သည့် အနက်အဓိပါယ်ဖြစ်သည် ။ ထိုအနက်အဓိပါယ်ဖြင့်ပင် ကမ္ဘာမကြေဆိုသော မြန်မာနိုင်ငံတော်သီချင်းစတင်ပေါက်ဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
မြန်မာနိုင်ငံတော်သီချင်း၏စတင်ပေါက်ဖွားခဲ့သော မူလဘူတ အရင်းခံမှာ တို့ဗမာအစည်းအရုံးကြီး၏ တို့ဗမာဆိုသောသီချင်းမှ မြစ်ဖျားခံသည် ။ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်လက်အောက်တွင် ကျွန်သဘောက်ဘ၀ ရောက်နေရသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ ၊တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုများအားလုံး နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် နိုးကြားတက်ကြွလာစေနိုင်သော သီချင်းတပုဒ်စပ်ဆိုရန် တို့ဗမာအစည်းအရုံးခေါင်းဆောင်အချို့က စိတ်ကူးရခဲ့သည် ။ ထိုစိတ်ကူးကို YMB ဆရာတင်ဆိုသော မန္တလေးမှ ဂီတဆရာကြီးတဦးနှင့် တို့ဗမာအစည်းအရုံးခေါင်းဆောင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှ တို့ဗမာသီချင်းစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည် ။ မြန်မာဂီတအနုပညာလောကတွင် ဆရာတင် အမည်တူလူသုံးယောက်ရှိသည် ။ သဟာယဆရာတင် ၊ နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်နှင့် YMB ဆရာတင်တို့ဖြစ်သည် ။ YMB ဆရာတင်မှာ မန္တလေးတွင်နေထိုင်စဉ် ၀ိုင်အမ်ဘီခေါ်ဗုဒ္စဘာသာလူငယ်များစာသင်ကျောင်း တွင် ဆရာလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ထိုသို့YMB ဂုဏ်ထူးဝိသေသတပ်၍ခေါ်ဝေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည် ။၁၉၃၀ တွင် ထို YMB ဆရာတင် မန္တလေးမှ ရန်ကုန်သို့ခေတ္တကြွလာစဉ် ရန်ကုန်၌ သခင်လူငယ်တစုနှင့် ဆက်သွယ်မိကာ တို့ဗမာဇာတိမာန် တက်ကြွစေသည့် နိုင်ငံကျော်တို့ဗမာသီချင်းကြီးကိုစုပေါင်းရေးသားကြခြင်းဖြစ်သည် ။ တို့ဗမာသီချင်းမှာ ပထမ ဗမာ့သမိုင်း ကိုနောက်ခံထား၏ ။ ဒုတိယ လက်ရှိ ဗမာ့ အခြေအနေကိုဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ သင်ခန်းစာယူဖွယ်ရာ ၊ထိုနေ့ာက်အားတက်ဖွယ်ရာ စကားလုံးပြောင်ပြောင်နှင့် ဖော်ထုတ်၏ ။ တတိယ၌ တို့ဗမာတို့၏ ခေတ်သစ်ထူထောင်ရန် ကျင့်စဉ်များကိုနှိုးဆွဖော်ထုတ်၏ ။ စတုတ္ထတွင် ကြားရသူ တို့ဗမာအပေါင်း ကြက်သီးမွေးညှင်းထလောက်အောင် ဇာတိသွေးကိုမြင့်တင်၏ ။ ထိုအချက်များပြည့်စုံအောင် စာသားများကို သခင်ဘသောင်း၊ သခင်သိန်းမောင်၊ သခင်လှဘော်၊ သခင်သာဒိုး ၊သခင်အုန်းဖေ၊ သခင်ကျော်ထွန်းစိန် ၊ သခင်ဖိုးနီ စသော သခင်များက စုပေါင်းရှာဖွေပေးကြပြီး ၀ိုင်အမ်ဘီဆရာတင်အားရေးစပ်စေ၏ ။ ဆရာတင်နှင့်သခင်တစုတို့ အပြန်အလှန်တည်းဖြတ်စစ်ဆေး ကြပြီး နောက် အောက်ပါတို့ဗမာ သီချင်းကြီး ဖြစ်လာလေသည် ။
“တကောင်းအဘိရာဇာ ၊တို့ဗမာသာကီမျိုးဟာမို့၊မညှိုးဂုဏ်တေဇာ ၊ ယိုးဒယားနှင့်ကုလားကိုပါ ၊ တိုက်ခိုက်ကာ ..အောင်ခဲ့တာ တို့ဗမာ ။ စိန်မှန်ကင်းစစ် ၊အဖြစ်ကြီးဖြစ်လျက် ၊ထင်းတလှည့်ကြုံရ ၊ထုံးနှင့်မသွေ ၊လောကဓမ္မတာပေ ၊ငါတို့ကံခေ …ဖြစ်ရပြန်သလေ ၊သို့သော် ..အရင်းကိုစစ်လျှင် ဗမာပြေ ၊ငါတို့ပြေ ။
နောင်ဥဒါန်း..ဘယ်မကြေစရာ ၊ ရာဇ၀င်ထင်ထား မျိုးရိုးနွယ်လာ၊ ကမ္ဘာတခွင်မှာဖြင့် ၊ ဗမာအထင်အရှား တို့ခေတ်တွင်မှ ညံ့ကြတော့မှာ လား ၊တို့ဗမာ ၊ တို့ဗမာ မဟုတ်လေသလား (တို့ဗမာ-ငါတို့ဗမာ )၂ (ဒါငါတို့ဗမာ)၂ အား..လုံး..ညီညီ ၊ယောက်ကျား ဘသား တို့ဗမာနောင်လာနောက်သားကောင်းစားဖို့ရာ ၊တို့ကိုယ်ကျိုး လုံးလုံးမပါ ၊ရဲရဲ ဗမာပီပီ ဗမာပြေ တို့ဗမာဘို့ ပါ ၊ သခင်ကျင့်ကိုကျင့်ကြပါ ၊ သခင်မျိုးဟေ့ ..တို့ဗမာ ၊ မိုးအောက်မြေပြင်မှာ အထက်တန်းစိတ်နဲ့ ၊စာမရီသွေး တို့ဗမာ ။
(သံပြိုင်) ကမ္ဘာမကြေ ..ဗမာတတွေ (ဒါတို့ပြေ ဒါတို့မြေ ဒါငါတို့ပြေ )၃ (တို့ ဗမာ)၂ ပြေကို တိုင်းရင်းသားအကုန်အစင် တို့ပြေလို့မှတ်ထင် ၊တို့ဝတ္တရား ပင် တို့ဗမာခင် ။
အမျိုးသားရေး …ကြိုးပမ်းကြပါ ၊တို့ဗမာ ..ဟေ့ တို့ ဗမာ ၊ သြော်..အမျိုးသားရေး ကို ကြိုးပမ်းကြပါ ၊ တို့ဗမာ ..ဟေ့ တို့ ဗမာ ၊အရှေ့ကနေ၀န်းထွက်သည့်ပမာ ၊ တို့ခေတ်ကိုရောက်ရမည်မှာ မလွဲပါ ။တို့ဗမာ …ဟေ့ တို့ဗမာ ၊ ဗမာပြည်တ၀ှန်း အကုန် ၊တို့အိမ်မှတ်ပါ တို့ယာမှတ်ပါ ၊ အဲဒါ တို့ဗမာ “
နောက်ပိုင်းတွင် တို့ဗမာအဖွဲ့ ကြီးထဲသို့ အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားများပါဝင်ရောက်လာသဖြင့် ယိုးဒယားနှင့်ကုလားကိုပါတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့တာ ဆိုသောစာသားအစား ယိုးဒယားနှင့် တိုင်းတပါးကိုပါ တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့တာ ဟု ပြင်ဆင်သီဆိုကြသည် ။ ဤသီချင်းစာသားများကြောင့် ဗမာပြည်တပြည်လုံးအုံးအုံးကျက်ကျက်ဖြစ်ကာ မျိုးချစ်စိတ်များတဖွားဖွား ထက်မြက်ခဲ့သည် ။ထိုသီချင်းကို ပထမဆုံးစတင်သီဆိုသည်မှာ ၁၉၃၀ ဇူလိုင် ၁၉ ရက် စနေနေ့ညတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သထုံဆောင် သဟာယ နှင့်စာဖတ်ခန်းတွင်ဖြစ်သည် ။ တက္ကသိုလ်ဘာသာပြန်နည်းပြဆရာသခင်ဘသောင်းသည် သင်္ချာနည်းပြဆရာ ဦးထွန်းစိန် ၊ မြန်မာစာနည်းပြဆရာ ဦးညွန့် ၊ ကျောင်းသားကိုနုတို့နှင့်တိုင်ပင်၍ ကျောင်းသားထုရှေ့မှောက်တွင်ဆိုပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ နောက်တနေ့(၁၉၃၀ ဇူလိုင် ၂၀ ရက် တနင်္ဂနွေ ) ညနေ ၅နာရီတွင် လူထုကိုပထမဆုံးအကြိမ် တို့ဗမာသီချင်းဆိုပြခဲ့သည် ။ ဆိုပြသောနေရာမှာ ရွှေတိဂုံဘုရား ရာဟုထောင့်ရှိ ဦးစံထွန်းတန်ဆောင်းသစ်ကြီးဖြစ်သည် ။ ပရိသတ်၏တောင်းဆို မှုကြောင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် ပြန်ဆိုပြရသည် ။ထိုနေ့ထိုအခါမှစကာ တို့ဗမာသီချင်းသည် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးပျံ့နှံ့သွားသည် ။အင်္ဂလိပ်လက်ပါးစေ ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ဖောက်ပြန်ရေးနိုင်ငံရေးအချောင်သမားများ အား ကမ္မ၀ါဖတ်သည်ကို ကြားရသည့်တစ္ဆေသရဲပမာ နှလုံးတုန် ၊ရင်ခုန် ၊ဒူးတုန် ၍သွား စေခဲ့သည် ။ ထို့ကြောင့်လည်း ထိုခေတ်က တို့ဗမာသီချင်းကို နိုင်ငံရေးကမ္မ၀ါဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည် ။
ကမ္ဘာမကြေ စာသားပါသော တို့ဗမာသီချင်းကို ၀ိုင်အမ်ဘီဆရာတင်ရေးစပ်ခဲ့သော ကာလမှာ ၁၉၃၀ တွင်ဖြစ်သည် ။ထိုအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကိုလိုနီနယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ကို လက်အုပ်ချီ ဘုရားထူးနေရသောအချိန်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထုက (အထူးသဖြင့် သခင်အသင်းဝင်များက) နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်ကို အလွန်မုန်းတီးနေသော အချိန်ကာလဖြစ်သည် ။ ထို့ကြောင့် ဤသီချင်းတွင်ပါဝင်သော ကမ္ဘာမကြေ ဗမာတတွေ ဟူသောစာသားမှာ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်ကို ကမ္ဘာကြေတဲ့အထိ ငါတို့ဗမာတွေက လုံးလုံးအခဲမကြေဘူးကွ ဟူသော အဓိပါယ်ကိုဆောင်မည်ထင်သည် ။ သို့သော်သီချင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြီး တက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်းတွင်ထည့်တော့ အင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့်ထည့်သွင်းဖော်ပြရာတွင်မူ ကမ္ဘာမကြေ၏အဓိပါယ်ကို ကမ္ဘာကြီးပျက်သည်အထိ ဗမာလူမျိုးရှိနေမည် ဟူသည့်အဓိပါယ်မျိုးဘာသာပြန်ခဲ့ကြပုံရလေသည် ။တကယ့်အဓိပါယ်ကား ကမ္ဘာမကြေသော်လည်း ဥဒါန်းမကြေဆိုသလိုပင် မင်းတို့အင်္ဂလိပ်တွေ လုပ်ထားနှင့်ဦးပေါ့ကွာ ငါတို့ ဗမာတွေကတော့ မင်းတို့ကိုဘယ်တော့မှအခဲမကြေဘူးဟေ့ အခွင့်သာတဲ့နေ့မှာ မင်းတို့ငါတို့အကြောင်းသိရမယ် ဟု မပြောသော်လည်း ပြောနေသယောင်ဖြစ်သဖြင့် ထိုစဉ်က သူ့ ကျွန်ဘ၀ရောက်နေသော မြန်မာပြည်သူများက ထိုသီချင်းကိုသောင်းသောင်းဖျဖျအားပေးကြခြင်းဖြစ်သည် ။
၁၉၄၇ ဇန်န္ဒ၀ါရီ ၂၇ ရက်နေ့တွင် အောင်ဆန်း-အက်တလီ စာချုပ်အရ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး တနှစ်အတွင်းရတော့မည်ဟုကတိရလာသောအခါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်သော ဖဆပလ အဖွဲ့ကြီးသည် အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက် ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲလေသည် ။လွတ်လပ်သော မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလံတော် ၊ နိုင်ငံတော်သီချင်းများကို ပြင်ဆင်ရပြန်သည် ။ ထိုအခါ နိုင်ငံတော်သီချင်းအတွက် အသစ်မရေးပဲ မြန်မာနိုင်ငံသားအများစု နားစွဲပြီးသားဖြစ်သည့် တို့ဗမာသီချင်းကိုပင် စာသားအနည်းငယ်ပြင်ဆင်ကာ ရေးဆွဲကြဖို့ အများစုက သဘောထားပေးကြလေသည် ။ ထိုသို့ဖြင့် တို့ဗမာသီချင်းကို ပြင်ဆင်ရေးသားပြုစုကြရာမှ ယနေ့အများသူငါ သိနေကြသော မြန်မာနိုင်ငံတော်သီချင်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက ၁၉၇၄ တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရာတွင်လည်း ၁၉၄၇ ခုနှစ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ရေးဆွဲခဲ့သော နိုင်ငံတော်သီချင်း “ကမ္ဘာမကြေ “ကိုပင် ဆက်လက်သုံးစွဲခဲ့သည် ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရာတွင်လည်း အလံ ၊ နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ပုံ စနစ် တို့ ကို ပြင်ဆင်ခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံတော်သီချင်းကိုမူ အဟောင်းကိုပဲဆက်လက်သုံးစွဲခဲ့သည် ။ နိုင်ငံတော်သီချင်းတွင်ပါရှိသော ဗမာဆိုသည့်စကားရပ်ကိုပဲ မြန်မာဖြင့် အစားထိုးခဲ့ပြီး ကျန်စာသားအားလုံးကို နဂိုအတိုင်း ဆက်လက်သုံးစွဲခဲ့သည် ။ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာမကြေဟူသောစာသားသည် လွတ်လပ်ရေးရသော ၁၉၄၈ မှစကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်တန့်တွင်ကျယ်နေခဲ့လေသည် ။
အကယ်စင်စစ် ကမ္ဘာမကြေဆိုသောစာသား မှာငြိမ်းချမ်းသောစာသားမဟုတ် ။ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုမုန်းသဖြင့် ကြိမ်းဝါးသောစကားလုံးဖြစ်သည် ။ထစ်ကနဲရှိအတိတ်ကို ပြန်လှန်ကာ မုန်းတီးနာကျည်းသောစကားလုံးဖြစ်သည် ။ မိမိ နိုင်ငံ မိမိလူမျိုး ၊ မိမိအစိုးရ ၊မိမိတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းဖြစ်လာချိန်တွင် ထိုစာသားသည် အသုံးပြုနည်းမမှန်တော့ဟုဆိုချင်ဆိုနိုင်သည် ။ ယခင်ခေတ်က ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ နိုင်ငံခြားသားတို့ကိုကမ္ဘာမကြေဟု ပြောခဲ့ကြတာသဘာဝကျပေသည် ။ ယခုအခါ ကျွန်တော်တို့သည် ဆက်လက်၍ ကမ္ဘာမကြေဟု သီဆိုနေရခြင်းမှာ
စဉ်းစားကြဖို့ကောင်းပြီဖြစ်သည် ။ ရန်သူမရှိလျှင်မနေတတ်သောစိတ်သည် စစ်အာဏာရှင်တွေမှာပဲရှိသည် ။ ကိုယ်ကျိုးရှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပဲရှိသည် ။ အလုပ်သမား၊လယ်သမား၊ ကျောင်းသား သာမန်ပြည်သူလူထုမှာ ထိုသို့သောစိတ်ထားများမရှိပေ ။ နိုင်ငံရေးတွင် အတိတ်မှာဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ ကောင်းမွန်သောအနာဂါတ်သို့ သာသွားနိုင်ရပါမည်။ သွားချင်ရပါမည် ။သွားရဲရပါမည် ။ ၈၈ အရေးအခင်းတွင် စစ်အာဏာရှင်များ၏ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် ဘ၀တွေပျက်အောင်လုပ်ခဲ့ကြခြင်းကို ခံခဲ့ရသော ကျောင်းသားများ ၏ခံယူချက်တခုကိုလေးစားမိသည် ။ သူတို့က အတိတ်ကဖြစ်ရပ်များနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ခွင့်လွှတ်တယ် ဒါပေမယ့် မေ့တော့မမေ့ဘူး ( Forgive but not forget ) ဟူသောစကားကိုပြောခဲ့ကြသည် ။ ထိုစိတ်ဓာတ်မျိုးသည်ချီးကျူးဖွယ်ဖြစ်သည် ။ မကောင်းမှုကိုလုပ်ခဲ့ကြသူတို့ကို မေ့ပျောက်၍မရ ၊သမိုင်းအမှန်ကိုထိမ်ချန်တာတော့လက်မခံ ။ သို့သော်ထိုလူများကိုလက်စားမချေပဲခွင့်လွှတ်ပေးမည်ဆိုသော စိတ်ဓာတ်သည် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည် ။ တိုးတက်သောနိုင်ငံများသည် ယခုအခါ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးတွင် ထာဝရမိတ်ဆွေ ၊ထာဝရရန်သူမရှိ ထာဝရအကျိုးစီးပွားသာရှိသည်ဟုပြောကြသောခေတ်ဖြစ်ပါသည် ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဂျပန်နှင့်အမေရိကန်သည် တဖက်နှင့်တဖက်သည်းကြီးမည်းကြီး ရန်ငြိုးကြီးစွာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသော နှစ်နိုင်ငံဖြစ်သည် ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပုလဲဆိပ်ကမ်း ကို ဂျပန်လေတပ်က စစ်မကြေညာပဲ (စစ်ဖြစ်နေခြင်းမဟုတ်ပဲ) ၁၉၄၁ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် အမေရိကန်တို့အတုံးအရုံးကျဆုံးကာအထိနာခဲ့ကြပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ထဲသို့ အမေရိကန်ပါဝင်လာခဲ့သည် ။ ဥရောပတွင် နာဇီဂျာမဏီ ၊ ဖက်ဆစ် အီတလီတို့လက်နက်ချအညံ့ခံသွားသော်လည်း အာရှနှင့်ပစိဖိတ်တွင် ဂျပန်တို့ သည် လက်နက်မချပဲ ဇွဲနပဲကြီးစွာဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေလေသည် ။ ထို့ကြောင့် အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း အမေရိကန်က ၁၉၄၅ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ဟီရိုရှီးမားမြို့ကို အနုမြူဗုံးကျဲချခဲ့ရာလူပေါင်းသိန်းနှင့်ချီ၍သေဆုံးခဲ့သည် ။ ဂျပန်ကလက်နက်မချပဲ ဆက်လက်ခေါင်းမာနေသဖြင့် သုံးရက်အကြာ သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် နာဂါဆာကီမြို့ကိုထပ်မံဗုံးကျဲ ချခဲ့လေသည် ။လူပေါင်းရှစ်သောင်းခန့်တပြိုင်နက်သေဆုံးခဲ့ပြန်လေ၏ ။ အနုမြူဓာတ်ငွေ့သင့်၍ တမြေ့မြေ့လူညွန့်တုံးကာ သေဆုံးကြသူများလည်း မရေတွက်နိုင်အောင်များပြားလှသည် ။ နောက်ဆုံးတွင် ဂျပန်တို့လည်းဆက်လက်ခေါင်းမမာနိုင်တော့ပဲ ချွင်းချက်မရှိလက်နက်ချအညံ့ခံကာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့လေသည် ။ ထိုသို့တဦးနှင့်တဦး ရန်ငြိုးအကြီးကြီး ကြီးကာ သတ်ကြဖြတ်ကြ အနုမြူဗုံးတွေကျဲချခဲ့ကြသော နိုင်ငံနှစ်နိုင်သည် ဘယ်တော့မှ အခဲမကြေကြပဲ ကမ္ဘာမကြေ ကြဖို့ကောင်းသည် ။ သို့သော် စစ်ရှုံးဂျပန်သည် သူတို့ ၏မြို့ကြီးနှစ်မြို့ မီးလောင်တိုက်သွင်းခံခဲ့ရခြင်း ကို သင်ခန်းစာယူသည် ။ စစ်နိုင်သွားသောအမေ၇ိကန်အပေါ်အခဲမကြေ ရန်လိုသောစိတ်များကိုဖျောက်ဖျက်လိုက်သည် ။ စစ်ရှုံးဂျပန်နိုင်ငံကို ပြာပုံထဲမှရုန်းထကာ စီးပွားရေးကိုပဲ ဇောက်ချလုပ်ကိုင်လိုက်ရာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီး၍ နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်ခန့်အကြာ (၁၉၉၅ ခုနှစ်ခန့်တွင် ) ဂျပန်သည် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးပြန်ဖြစ်လာတော့သည် ။ ဆိုလိုသည်ကား မုန်းစရာနာကျည်းစရာအတိတ်ဇာတ်လမ်းများရှိခဲ့သော်လည်း အတိတ်ကိုသင်ခန်းစာယူကာစိတ်ဓာတ်မကျပဲ တမျိုးသားလုံးကြိုးစားကြသဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံပြန်လည်နာလန်ထလာပုံဖြစ်သည်။ ဂျပန်သည် ကမ္ဘာတွင် အနုမြူဗုံးဒဏ်ကိုလက်တွေ့ ခံရသောတခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်သည် ။ ထိုသမိုင်းကိုဂျပန်တွေမမေ့ ။ တနှစ်တခါ ဟီရိုရှီးမားနှင့် နာဂါဆာကီတွင် အမှတ်တရအခမ်းအနားတွေလုပ်သည် ။ အမေရိကန်ကလည်း ပုလဲဆိပ်ကမ်းတိုက်ခိုက်ခံရသောနေ့တွင် တနှစ်တခါ အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားတွေလုပ်သည် ။ သူတို့သည် အတိတ်ကိုမမေ့ကြ ။သို့သော် အတိတ်ဆိုသောထောင်ချောက်ထဲမှာ ပိတ်မိမနေ ပစ္စုပ္ဖန် နှင့်အနာဂါတ်ဆိုသော ထွက်ပေါက်မှ လှလှပပရုန်းထွက်သွားကြသည် ။
ဗီယက်နမ်တွေလည်းထိုနည်းနှင်နှင်ပင် ။ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲတွင် အမေရိကန်နှင့် ဗီယက်နမ်တို့အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည် ။ နှစ်ဖက်မရေတွက်နိုင်လောက်အောင်အကျအဆုံးများခဲ့ကြသည် ။ ယခုအခါမှာတော့ ဒါတွေကို ဘေးဖယ်လိုက်ကြကာ အမေရိကန်နှင့်ဗီယက်နမ်လက်တွဲကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်နေကြသည် ။တချိန်ကနှစ်ပိုင်းကွဲခဲ့သော အရှေုနှင့်အနောက်ဂျာမဏီနိုင်ငံတို့လည်း အရင်းရှင်စနစ်ကျင့်သုံးသော အနောက်ဂျာမဏီ ၊ ကွန်မြူနစ်စနစ်ကျင့်သုံးသော အရှေဂျာမဏီဟူ၍ ၀ါဒတွေ ၊ အယူအစွဲတွေ ၊ နောက်ကွယ်ကအကြောင်းတွေကို ပြန်လှန်ကာ ငြင်းခုန်မနေကြပဲ အတူတကွ ပူးပေါင်းလက်တွဲခဲ့ရာ ယခုအခါတွင် ဂျာမဏီနိုင်ငံသည် တပေါင်းတစည်းတည်း တနိုင်ငံတည်းအဖြစ် အေးချမ်းဖွံဖြိုးတိုးတက်သာယာစွာ ကမ္ဘာ့အလည်တွင် တင့်တယ်နေချေပြီ ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင် ဟစ်တလာခေါင်းဆောင်သောဂျာမန်တွေကဂျူးလူမျိုး ခြောက်သန်းကို အဆိပ်ငွေ့ဖြင့်ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည် ။ယခုအခါ အစ္စရေးနှင့် ဂျာမန်တွေလည်း တစောင်းစေးနှင့်မျက်ချေးဖြစ်မနေတော့ ။ချစ်ကြည်ရေးတွေရနေသည် ။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင်လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ခိုက်ခဲ့သော ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲကာ နိုင်ငံရေးအရရှေ့ဆက်နိုင်ကြလေပြီ ။ နီပေါနိုင်ငံတွင်လည်း သူပုန်များနှင့်အစိုးရ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုအောင်မြင်ကာပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲလေပြီ ။သီရိလင်္ကာပြည်တွင်းစစ်လည်းရပ်စဲပြီ ။ တဖက်နှင့်တဖက် ၊တဖွဲ့နှင့်တဖွဲ့ အနိုင်ယူကာ ကမ္ဘာမကြေစတမ်း ရန်ငြိုးဖွဲ့နေသည်လည်းမရှိကြတော့ပြီ ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသည် အတိတ်ကရန်ငြိုးများမပြေနိုင်သေး ။တဖွဲ့နှင့်တဖွဲ့ တယောက်နှင့်တယောက် မယုံကြည်နိုင်ကြသေး ။ ဗမာကိုတိုင်းရင်းသာေးတွကမယုံ ၊ ဗမာကတိုင်းရင်းသားတွေကိုမယုံ ၊ ဗမာကို ဗမာကမယုံ ၊ ကျောင်းသားကိုစစ်သားကမယုံ ၊ စစ်သားကိုကျောင်းသားကမယုံ ၊ အစိုးရကို နိုင်ငံရေးသမားကမယုံ ၊ စစ်ဘက်အရပ်ဘက် တယောက်ကိုတယောက်မယုံ ။ မယုံသင်္ကာ သံသရာကြီး မြန်မာပြည်မှာကြီးနေသည် ။ ရှေ့တွင် ပြုံးပြကြသော်လည်းနောက်ကွယ်တွင်လစ်သည်နှင့်ဆော်ကြသည် ။ ညစ်ကြသည်။ ဘယ်တုန်းက ဒီကောင်တွေငါတို့ကိုဘယ်လိုလုပ်ထားတာ ဟူသောစကားကို နှစ်ဘက်လုံးက အမြဲတမ်း ပြန်ပြောင်းတွေးဆကာ လက်တုန့်ပြန်ကြသည် ။ မိမိခံထားရတာကို ဘယ်တော့မှမကြေကြောင်းပြကြသည် ။ သာယာဖြောင့်ဖြူးသော အနာဂါတ်ဆီသို့မသွားနိုင်ကြပဲ အတိတ်ဆိုသော ဗွက်အိုင်ထဲမှာပဲ ချောင်ပိတ်နေကြသည် ။
ကျွန်တော်ကတော့ နိုင်ငံတော်သီချင်းတွင်ပါဝင်သော ကမ္ဘာမကြေ ဟူသောစာသားကို စိတ်နာသည် ။ ၁၉၃၀ လောက်ကနာကျည်းမှု သိမ်ငယ်မှု ၊ အငုံ့စိတ်တွေကို ထိုစာသားသည် ၂၁ ရာစု အထိသယ်ဆောင်လာသည်ဟုထင်သည် ။ သို့ မဟုတ် ၁၉၃၀ -၁၉၄၇ လောက်က မှန်ကန်ခဲ့သော နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဝင် တောက်ခေါက်သံကို သူ့အချိန်နှင့်သူ သူ့ နေရာနှင့်သူမထားခဲ့ပဲ ဒီဘက်ခေတ်အထိ ဥဒါန်းမကြေ ရန်ငြိုးဖွဲ့သို ယူဆောင်နေကြ သောစိတ်ဓာတ်က ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှည်ကြာနေစေသည်ဟုထင်သည် ။ ယနေ့ခေတ်သည် ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးခေတ် ၊ အနည်းဆုံးတော့ ပန်းများအားလုံးပွင့်ကြသော ဗဟုခေတ် ။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးခေတ် ။ လူတွေအချင်းချင်း ပူးပေါင်းကာအလုပ်လုပ်ကြသောခေတ် ။တယောက်နှင့်တယောက် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရသောခေတ် ။ဘာသာမတူ လူမျိုးမတူသူတွေ တွေ့ ဆုံကြသောခေတ် ၊ အတိတ်ကရန်ကြွေးတွေ ၊အမုန်းတရားတွေကိုရှေ့ တန်းတင်ကာ အတ္တတွေကြီးနေရမည့်ခေတ်မဟုတ်ပြီ ။
Forgive but not forget ဆိုသောစကားအတိုင်း ပါဝင်သူအားလုံး ၀ိုင်းကြ၀န်းကြပါမှ မြန်မာပြည်သာယာမည့်ခေတ်ဖြစ်သည် ။ ကမ္ဘာကြီးတွင် တယောက်ကိုတယောက်အခဲမကြေသတ်ဖြတ်ကြသောခေတ်မဟုတ်တော့ပါပြီ ။ ၀ိုင်အမ်ဘီဆရာတင်၏ တို့ဗမာသီချင်းထဲကလို အရှေ့ကနေ၀န်းထွက်သည့်ပမာ ၊တို့ခေတ်ကိုရောက်ရမည်မှာ မလွဲပါ ဟူသည့်ကြွေးကြော်သံများတကယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုလျှင် မကြေနိုင်မချမ်းနိုင်သောစိတ်များကို အသစ်ပြောင်းကာ နိုင်ငံသားအားလုံး စိတ်သစ၊် လူသစ်၊မူသစ်ဖြင့် စစ်ရှုံး ဂျပန်နိုင်ငံလိုအပြင်းအထန် အလုပ်လုပ်ကြဖို့လိုမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
Posted by Alex Aung at 5:11 AM No comments:
စီလီကွန်တောင်ကြား (Silicon Valley) နဲ့ Artificial Intelligence နည်းပညာ
စီလီကွန်တောင်ကြားနဲ့ A.I နည်းပညာဆိုတာ
နည်းပညာလောကသားတွေ ပါးစပ်ဖျားက စီလီကွန်တောင်ကြား (Silicon Valley) ဆိုတာ တကယ့်တောင်ကြားကြီးပဲလား ၊ ဘာတွေရှိပြီး ၊ ဘာတွေလုပ်တာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကို မေးချင်နေကြတဲ့ သူတွေ ရှိနေမှာ သေချာပါတယ် ။ တကယ်တော့ စီလီကွန်တောင်ကြားဆိုတာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၊ မြောက်ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်ထဲက ဆန်ဖရန်စစ္စကို ကမ်းခြေနားမှာ တည်ရှိတဲ့ နေရာဒေသတစ်ခု ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒေသရဲ့ အလယ်က Santa Clara Valley ဆိုတဲ့ တောင်ကြားတစ်ခုကို အစွဲပြုလို့ အဆင့်မြင့် နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေ ရာပေါင်းများစွာနဲ့ နည်းပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီထောင်ပေါင်းများစွာတို့ရဲ့ အဓိက အခြေပြုတည်ရှိရာ ဒီဒေသကို စီလီကွန်တောင်ကြားလို့ ခေါ်တွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာခေတ်ရဲ့ အဓိက ထုတ်ကုန်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ Silicon Chip ပေါင်းမြောက်မြားစွာထုတ်လုပ်တဲ့ နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေကို အစွဲပြုလို့ စီလီကွန်တောင်ကြားလို့ခေါ်ဆိုခဲ့တာဟာ အခုဆိုရင် အမေရိကန်ရဲ့ နည်းပညာနယ်ပယ်ဒေသကြီးတစ်ခုအဖြစ် ကမ္ဘာမှာကျော်ကြားနေပါပြီ ။ ပထ၀ီအနေအထားအရတော့ စီလီကွန်တောင်ကြားရဲ့ အနားမှာ Peninsula တောင်ကြား နဲ့ အမေရိကားရဲ့ အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေတို့ တည်ရှိပြီး အလယ်မှာတော့ San Jose ဆိုတဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော်ဟောင်းရှိပါတယ် ။
စီလီကွန်တောင်ကြားလို့ အမည်ပေးခဲ့တဲ့ သူကတော့ Ralph Vaerst ဆိုတဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကပါ ။ ဒီနာမည်ကို Electronic News ဆိုတဲ့ သတင်းစာမှာ အခန်းဆက်ဆောင်းပါးရှည်အတွက် ခေါင်းစဉ်အဖြစ် Vaerst ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Don Hoefler ဆိုတဲ့သူက စတင်သုံးနှုန်းခဲ့တာပါ ။ Silion Valley in the USA ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးပါတဲ့ သတင်းစာကို ၁၉၇၁ ဇန်န၀ါရီ ၁၁ ရက်က ပုံနှိပ်ခဲ့တာဆိုတော့ အခုဆိုရင် စီလီကွန်တောင်ကြားဆိုတဲ့အမည်ဟာ နှစ်ပေါင်း (၄၀) ကျော်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စီလီကွန်တောင်ကြားရယ်လို့ ၁၉၈၀ နှစ်များလောက်ကအထိ လူသိမများခဲ့ကြသေးပါဘူး ။
အဲ့ဒီ စီလီကွန်တောင်ကြားဟာဆိုရင် အမေရိကားရဲ့ ကမ္ဘာကျော် စတန်းဖို့ တက္ကသိုလ်ကြီးက ဘွဲ့ရကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် အလုပ်အကိုင်နဲ့ အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးပေးနေတဲ့ ဒေသလည်းဖြစ်ပြန်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် သိန်းပေါင်းများစွာသော အိုင်တီနည်းပညာရှင်များ ကျင်လည်ကျက်စားရာ နေရာဒေသလည်းဖြစ်တယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တုန်းက AeA လို့ခေါ်တဲ့ American Electronics Association အဖွဲ့အစည်းရဲ့ စစ်တမ်းအရ စီလီကွန်တောင်ကြားဟာ အမေရိကားရဲ့ နည်းပညာမြို့တော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ New York နဲ့ Washington ပြီးရင် တတိယအကြီးဆုံး Cybercity ဖြစ်ပါတယ် ။ နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အလုပ်အကိုင်ပေါင်း ၂၂၅,၃၀၀ ကျော် ရှိပြီး ဧရိယာ စတုရန်းကီလိုမီတာ ၄၀ ကျော် (၉၉၀၀ ဧက) ကျယ်ဝန်းပါတယ် ။
ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာကျော်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေထဲက အတော်များများဟာ စီလီကွန်တောင်ကြားမှာ တည်ရှိသလို NASA Ames Research Center တို့လို အစိုးရ သုတေသန အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေလည်း အခြေပြုပါတယ် ။ စီလီကွန်တောင်ကြားရဲ့ အလယ်က မြို့တော်ဟောင်း San Jose အပါအ၀င် မြို့ပေါင်း ၁၅ မြို့ဟာ တောင်ကြားရဲ့ နယ်နမိတ် အတွင်းမှာပါဝင်ပါတယ် ။ စတန်းဖို့စ် တက္ကသိုလ်တို့လို ကမ္ဘာကျော် တက္ကသိုလ်ကြီးတွေ အပါအ၀င် တက္ကသိုလ် ကောလိပ်ပေါင်း ၃၀ စီလီကွန်တောင်ကြားမှာ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားနေပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေက ဘွဲ့ရ၊ ဒီပလိုမာရကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်လည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ မြောက်မြားစွာဖန်တီးပေးနေတဲ့ နေရာဒသလည်းဖြစ်ပါတယ် ။
စီလီကွန်တောင်ကြားဒေသမှာ နည်းပညာမြင့်ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ အဆောက်အဦးတွေ ၊ အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ် ကောလိပ်ကြီးတွေအပြင် ကမ္ဘာကျော် Computer History Museum တို့လို အထင်ကရအဆောက်အဦးတွေ ၊ အထိန်းအမှတ်နေရာတွေ ၊ ဒေသရဲ့ ရိုးရာပွဲတော်ကြီးတွေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး စည်းကားလွန်းပါတယ် ။ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ အထူး စိတ်ဝင်စား လာရောက် လည်ပတ်လေ့ရှိတဲ့ San Jose မြို့ရဲ့ မြို့တော်အဖြစ် အထင်ကရ အထိန်းအမှတ် Circle of Palms နဲ့ SJ Muesum of Art တို့ဟာ ဆိုရင် နှစ်စဉ် ခရီးသွားများနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ် ။
Cathedral Basilica of St. Joseph ဘုရားကျောင်း နဲ့The San Jose Center for the Performing Arts တို့ လို ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ပြယုဂ်အဆောက်အဦးတွေ၊ လည်ပတ်အပန်းဖြေချင်စရာ ပန်းခြံ ၊ ဥယျာဉ်တွေ နဲ့ စီလီကွန်တောင်ကြားဟာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ ။ ဒါ့အပြင် ရိုးရာဂီတပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ San Jose Jazz Festival ကိုလည်း နှစ်စဉ် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားပေါင်း သိန်းချီလာရောက် ဆင်နွှဲလေ့ရှိပြီး အထူးစည်ကားပါတယ် ။
တကယ်တော့ စီလီကွန်တောင်ကြားဒေသဟာ ခေတ်သစ်နည်းပညာတွေနဲ့ ထုတ်ကုန်တွေထွက်ရှိရာ ဒေသတစ်ခုတင်မကပါဘူး ရှေးဟောင်းရိုးရာအစဉ်အလာ အမွေအနှစ်အဆောက်အဦးတွေ ပွဲတော်တွေနဲ့ အဖက်ဖက်က စည်ပင်ဝပြောတဲ့ ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြန်ပါတယ် ။ Microsoft ရဲ့ ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် Bill Gates နဲ့ Jobs တို့လို စွမ်းဆောင်ရှင်တွေရဲ့ ကျင်လည်ကျက်စားရာ နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ကမ္ဘာကျော် ပုဂိုလ်တွေနဲ့ ဒီဒေသကို နောက်ခံထားလို့ Pirates of Silicon Valley ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကို ၁၉၉၉ နှစ်မှာ ရိုက်ကူးပြီး ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ် ။ စာရေးဆရာ Paul Freiberger and Michael Swaine တို့ရေးသားတဲ့ Fire in the Valley: The Making of The Personal Computer ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ရုပ်ရှင်ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပါ ။ ၁၉၇၀ နှစ်များလောက်က Bill Gates နဲ့ Steve Jobs တို့ရဲ့အကြောင်းကို ရေးဖွဲ့ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ Personal Computer ကို ဖန်ဆင်းဖို့ ကြိူးစားခဲ့ကြတဲ့ ပြိုင်ဘက်နှစ်ဦးရဲ့ အကြောင်းပါ ။
နည်းပညာခေတ်ကြီးရဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဒေသကြီးဖြစ်တဲ့စီလီကွန်တောင်ကြားဟာ ယနေ့ခေတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကို အထောက်အကူအပြုနိုင်ဆုံး နေရာဒေသတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး ။ Personal Computer တို့လို လူ့သမိုင်းကြောင်းကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တိုးတက်စေမယ့် အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ ပညာရပ်တွေ မွေးဖွားရာဒေသ တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ နောင်အနာဂတ်မှာလည်း ကမ္ဘာကြီးကို အကျိူးပြုမယ့် နည်းပညာသစ်တွေကို ဆက်လက်မွေးဖွားဖို့ရာ ရေခံမြေခံကောင်းတဲ့ ဒေသ အဖြစ်နဲ့လည်း ရပ်တည်နေပါတယ် ။ ဒီ စီလီကွန်တောင်ကြားဆိုတဲ့ နေရာဒေသက နေ ရှေ့ဆက်ပြီး ရှေ့ဆက်ပြီး ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ပုဂိုလ်တွေ ၊ ကမ္ဘာကျော် သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ၊ ကမ္ဘာကျော်နည်းပညာဆန်းတွေ မွေးထုတ်ဖန်ဆင်းပေးနေဦးမှာ ဧကန်မလွဲပါပဲ ။
၂၀၁၇ ကုန်လို့ဒီနေ့၂၀၁၈ မှာတော့ (Artificial Intelligence) လို့ ခေါ်တဲ့နည်းပညာသစ်ဟာ လူသားတွေအတွက် အသစ်ထပ်မံလို့ မိတ်ဆက်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ ခေတ်နောက်ကျနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပါရောက်ရှိနေပါပြီ။ လူတိုင်းနီးပါးသုံးစွဲနေကြပေမယ့်၊ ဘာမှန်းသေချာမသိသူတွေ အများကြီးရှိနေတာကတော့ A.I ပါပဲ။ A.I ကို စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ စတင်ပြီး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာအောင်လို့လူသားတွေလက်ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်ပေမယ့် အသုံးကျအောင်မသုံးတက်သူတွေ ဒီဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြီး ဗဟုသုတရစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
A.I ဆိုတာ Artificial Intelligence ရဲ့ အတိုကောက်ပါ။ “ဥာဏ်ရည်အတု” နည်းပညာလို့လည်း ခေါ်ဆိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ အတွင်းမှာပဲ AI သုတေသနဟာ အဆင့်အဆင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ပြင်ပလုပ်ငန်း နယ်ပယ်၊ အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးမှာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ နေရာယူလာခဲ့ပါတယ်။ ပထမတော့ လူ့လုပ်အားနေရာမှ အစားထိုးသုံးလို့ ရနိုင်မယ့် စက်ရုပ် (ရိုဘော့) တွေက စတာပါ။ နောက် အဲဒီရိုဘော့တွေထဲမှာ လူ့အပြုအမူဖြစ်စဉ်တွေကို ပရိုဂရမ် သွင်းကြည့်လာတယ်။ နောက်တစ်ဆင့်ရောက်တော့ လူ့စိတ်ကူးဖြစ်စဉ်ကိုပါ ထည့်ကြည့်လာကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စက်ရုပ်နဲ့မတူတဲ့ စက်ရုပ် Mecha တွေ ဖြစ်လာပြီး သူတို့ရဲ့ အသိဉာဏ်ကို ဉာဏ်ရည် အတု (AI) လို့ခေါ်တဲ့ Artificial Intelligence ပညာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့လက်ရှိ တရုပ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာမှာ First A.I Smart Phone အဖြစ် စတင်ပြီးတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ အများသိကြတဲ့ Huawei phone company က Huawei Mate 10 နဲ့ Huawei Honor Magic ဖုန်းကို ကမ္ဘာဖုန်းဈေးကွက်မှာ တီထွင်ရောင်းချလိုက်ပြီဖြစ်သလို Oppo company ကလည်း အပြိုင်အဆိုင် Oppo F5 (A.I) Smart Phone ကို ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ တရုပ်နိုင်ငံနဲ့တရုပ်လူမျိုးတွေရဲ့ နည်းပညာတိုးတက်လာမှုကို ပြသလိုက်တာပါ။ အနောက်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ (U.S.A) United State Of America က U.S Navy မှာ A.I နည်းပညာထည့်သွင်းထားတဲ့ Huge A.I Drone Boat စစ်သင်္ဘောကို လူမပါဘဲ တုက်ခိုက်ရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေး အခန်းကဏ္ဏမှာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ တီထွင်ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်သလို South China Sea တောင်တရုပ်ပင်လယ်အထိ ခြေဆန့်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်း ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
စစ်တပ်က မဟုတ်ပဲ အရပ်ဘက်က Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rolls-Royce Shipping Company က အနာဂတ် ကုန်သွယ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရာမှာအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီး A.I technology နဲ့ GPS စနစ်ထည့် သွင်းထားတဲ့ Future Cargo Ship တွေကို တည်ဆောက်ပြီးတော့ နောင်တစ်ချိန်မှာ သင်္ဘောသားတွေမပါဘဲ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံကို ကုန်သွယ်ပို့ဆောင်ရေးစနစ်အခန်းကဏ္ဏကို အလျှင်အမြန်လုပ်ဆောင်နေပါပြီ။
နံမည်ကြီး Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Google က NASA နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ Quantum Physic ကို အခြေခံထားတဲ့ quantum computing the mechanic of super position by statellite နဲ့ Control လုပ်နိုင်မယ့် D.Wave လို့ခေါ်တဲ့ Machine စက်ပစ္စည်းကို California မြို့မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပရယ်လ လောက်ကစတင်ပြီးတော့ တီထွင်နေကြတာ ခုဆိုရင်တော့ Universe စင်္ကြာဝဠာထဲမှာရှိတဲ့ ဂြိုလ်တွေပေါ်ကို ဆင်းသက်ပြီး အလိုအလျှောက် တွက်ချက်အဖြေထုတ်နိုင်တဲ့ Auto Robot ကို AI စနစ်နဲ့ အသက်သွင်းပြီးပါပြီ။
ဒီတော့ ခေတ်နောက်ကျနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအတွက်လည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကြားမှာ သိသင့်တာတွေသိနေဖို့ လေ့လာသင့်တာလေ့လာဖို့လိုအပ်နေပါပြီ :) ကဲ အနာဂတ်ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်များဖြစ်ကြတဲ့ ညီငယ်၊ညီမငယ်များကိုယ်တိုင်ပဲ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြည့်ကြပါ။ ဒီလိုနည်းပညာရပ်တွေကို မလေ့လာချင်ဘူးလား? ဒါဆိုရင်တော့ A.I လို့ခေါ်တဲ့ Artificial Intelligence အကြောင်းကို အင်တာနက်က ဖတ်ဖူးတဲ့စာစောင်ထဲက ဆောင်းပါးတစ်ခုကို အသးစိတ်ထပ်မံလေ့လာကြည့်ကြပါ။
Artificial Intelligence နည်းပညာ……။
*** (၂၁)ရာစုခေတ်ကြီးမှာလူအစားထိုးစက်ရုပ်နည်းပညာများ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များနှင့်အတူတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပြောဆိုလာတဲ့ Artificial Intelligence လို့ခေါ်တဲ့နည်းပညာအကြောင်းကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုပါ….။
Artificial Intelligence ဆိုတာဘာလဲ…..။
*** Artificial Intelligence ဆိုတာ အသက်မရှိပေမယ့် လူသားတွေရဲ့ အသိဥာဏ်လို ရလာအောင် ကြိုးစားတဲ့နည်းပညာကို Artificial လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝမဟုတ်တဲ့ တုပထားတဲ့အသိဥာဏ်ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်…။ လူသားတွေရဲ့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ သိပ္ပံပညာ၊ ဆေးလောက တိုးတက်မှုဟာ သတ္တဝါတွေထဲက အသိဥာဏ် အမြင့်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ လူသားတွေကြောင့် ဖြစ်ပြီး သက်ရှိ ဇီဝကို အခြေခံတဲ့ အသိဥာဏ်ကို အတိုးတက်ဆုံး အဖြစ် သတ်မှတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
*** ဒီနည်းပညာကတော့ ဇီဝ စဉ်းစားမှု မရှိတဲ့ စက်ကရိယာ၊ ကွန်ပြူတာတို့နဲ့ တီထွင်ထားတဲ့ အသိဥာဏ်လုို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အဇီဝ(ဇီဝသက်ရှိမဟုတ်တဲ့) အသိဥာဏ်သုံးနည်းပညာများကိုဖန်တီးရာမှာ ပညာရပ်အတော်များများကို အခြေခံပြီးသုတေသနတွေ လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်..။
Artificial Intelligence ဆိုတာ ဘယ်လိုပညာရပ်တွေပေါ်မှာ အခြေခံပါသလဲ။
*** ArtificialIntelligence ကို သိပ္ပံဘာသာရပ်တခုထဲနဲ့ တီထွင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘဲကွန်ပြူတာနည်းပညာ၊ သင်္ချာနည်းပညာ၊ စက်ရုပ်နည်းပညာ ရပ်တွေ ပါဝင်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာတခုထဲနဲ့လဲပဲ အဲ့ဒီ A.I နည်းပညာသုံးစက်ရုပ်များကို တီထွင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး…။ စိတ်ပညာ၊ ဘာသာစကားတွေကို လေ့လာတဲ့ linguistic ၊ ဒဿနိက ဗေဒ ဘာသာရပ်ရဲ့တွေးခေါ်မှုအပိုင်းတွေပါထပ်ဖြည့်ရမှဖြစ်ပါတယ်…။
*** Artificial...Intelligence သုံးစက်တွေဟာလူတွေတွေးခေါ်သလို စက်တွေတွေးလာအောင်၊လူတွေရဲ့စိတ်ထဲက ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတိုင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် သင်ပေးလို့ရမလား ဆိုတဲ့ အဇီဝ အသိဥာဏ်ကို ဖန်တီးယူတာပါ။ ဒါ့အပြင် neuroscience လို့ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်ကို ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Nuron ဆဲလ်တွေကို လေ့လာတဲ့ ပညာကလည်း အဇီဝအသိဥာဏ် ဖန်တီးရေးမှာ သိပ်ကို အရေးပါပါတယ်။
သက်ရှိတွေရဲ့ အသိဥာဏ်နဲ့ Artificial…Intelligenceရဲ့ကွာခြားမှု
*** ဇီဝလောကထဲမှာ အသိဥာဏ်အကောင်းဆုံးအထက်မြက်ဆုံးက လူသားဖြစ်ပြီး လူပြီးရင်ဒုတိယလိုက်တာက ချင်ပန်ဇီ မျောက်ဝံတွေလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ချင်ပန်ဇီနဲ့ လူတို့ဟာ မျိုးဗီဇ DNA မှာ (၉၉%) တူညီပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွာခြားမှုကြီးမားခြင်းကတော့ လွန်စွာကွာခြားလှပါတယ် ....။
*** လူနဲ့ချင်ပန်ဇီကွာခြားမှုကတော့ စဉ်းစားတွေးခေါ် မျှော်မြင်တာ၊ ဘာသာစကားကို ကောင်းကောင်း ပြောနိုင်တာ၊ တီထွင်နိုင်တာ၊ creativity ဖန်တီးနိုင်တာ၊ မရှိရှိတဲ့ ပစ္စည်းလေးနဲ့ဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်တွေမှာ များစွာကွာခြားလှပါတယ် ..။ အဲဒီအသိဥာဏ်ကြောင့် ချင်ပန်ဇီနဲ့ လူကြား ကွားခြားမှုဘယ်လောက် ရှိတယ် ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။
Artificial…Intelligence (အဇီဝသက်မဲ့အသိဥာဏ်) နဲ့ တီထွင်ထားတဲ့ စက်တွေအသုံးပြုပုံ
*** Development Country များမှာတော့ မောင်းသူမဲ့ ကားတွေ၊ ဒရုံးယာဉ်တွေ ဟာ Artificial Intelligence ကို သုံးထားတာဖြစ်တယ်..။ ကားလုပ်ငန်းမှာ ထောင်နဲ့ ချီထုတ်လုပ်နေတဲ့ ကားတွေအတွက် ဂဟေဆော်တာ၊ စက်တွေ ဆင်တာ၊ အင်ဂျင်တင်တာတွေက အစ ရိုဘော့ စက်ရုပ်တွေနဲ့ လုပ်ပေးနေပါ။
*** ဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာလဲသုံးပါတယ်..။ google now မှာ လက်ကိုင်ဖုံးနဲ့ သုံးတဲ့အခါ လမ်းနံမယ်က ပြင်သစ်လိုရေးထားတာကို ဖုန်းက ကင်မရာနဲ့ ချိန်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်တာနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ပြီးသားရတာမျိုးဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာကို ခလုပ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ အခြားဘာသာလို ပြန်ပြီးသား ဖြစ်သွားတာဟာ AI ကို သုံးထားတာပါ။ နောက် ဆယ်နှစ်လောက် ဆိုရင် အခု သုံးနေတဲ့ YouTube မှာ အင်္ဂလိပ်ဇာတ်လမ်းတွေ ထဲက မင်းသား မင်းသမီး အသံတွေကို တောက်လျှောက် အလိုအလျှောက် ဘာသာပြန်ပေးတာမျိုးတွေ လုပ်နိုင် အောင် အခုစကြိုးစားတီထွင်နေပြီဖြစ်ပါတယ် ..။
Control System ကဲ့သို့ စနစ်များ
*** ကိုယ့်အိမ်၊ ကိုယ့်အလုပ်ခန်းထဲကို ကိုယ်ဝင်လာမှအပူချိန်ချက်ချင်း ပြောင်းပေးတာတွေ နဲ့ အခြား အသံစနစ် များနဲ့ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့စနစ်များကိုလည်း Artificial…Intelligence နဲ့အသုံးပြုပါတယ်..။Smart Home Design လို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။ ကိုယ့်ကားရပ်ခဲ့တဲ့ နေရာကို ဖုန်းနဲ့ ပြန်ရှာနိုင်တာမျိုးလည်း လုပ်နိုင်တဲ့စနစ်များပါသုံးနိုင်နေပါပြီ..။
*** ဆေးပညာမှာ အသံပျောက်သွားတဲ့ သူအတွက် မူလအသံ ပြန်ရအောင် လုပ်ပေးးဖို့ သူ စကားပြောနိုင်ချိန်က အသံကိုပြန်သုံးနိုင်ဖို့လုပ်ပေးတာတွေကဲ့သို့သောဆေးပညာအကူအညီများမှာသုံးပါတယ်..။ ကျောက်ကပ် အစားထိုးတာတဲ့နေရာမှာအစားထိုးမယ့် သူနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် သွေးအမျိုးအစား၊ ခြင်ဆီ တူမတူ နာရီပိုင်းအတွင်း စစ်ဆေးရာမှာ သုံးကြသလို၊ ဆေးအမျိုးအစား အသစ်တွေဖေါ်စပ် ရာမှာ လည်း သုံးပါတယ်…။ နာမကျန်း ဖြစ်နေသူတွေ၊ သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေ နေ့စဉ်သွားလာ လှုပ်ရှားရေးမှာ လိုအပ်တာကို အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးနိုင်မယ့် သူနာပြု စက်ရုပ်တွေကိုစသုံးနေပါပြီ။
*** အိမ်မီးလောင်နေချိန်မှာ မီးသတ်သမား ဝင်လို့မရဖြစ်နေမယ် ဆိုရင် အထဲမှာ လူနဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေ ဘယ်နေရာမှာ ကျန်နေတယ် ဆိုတာကို စက်ရုပ်တွေ လွှတ်ပြီး ရှာဖွေ ကယ်တင်ပေးနိုင်ပါပြီ။ တွင်းထွက် သတ္တုရှာဖွေရာမှာ စက်ရုပ်ကို လွှတ်ပြီး ရှာဖွေနိုင်တာ ဖြစ်ပြီး သတ္တု အမျိုးအစားတင်မက ပါဝင်နှုန်းတွေကိုပါ ချက်ချင်း သိအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းပညာတွေပေါ်လာပါပြီ။
***အမေရိကန် အာကာသ စူးစမ်းလေ့လာရေး နာဆာက ကမ္ဘာကနေ လနဲ့ချီ သွားမှ ရောက်တဲ့ အင်္ဂါဂြိဟ်ပေါ်ကို စက်ရုပ်ကားကလေးတွေ လွှတ်တင်ထားပြီး အဲဒီက သိပ္ဗွံဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို AI နည်းပညာသုံးပြီး ဆန်းစစ်မှုများဆောင်ရွက်နေပါတယ်….။ အပေါ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ D.Wave လို့ခေါ်တဲ့ စက်ရုပ်ကားလေးတွေပါ။
လူသားတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝထဲ အသုံးတဲ့လှတဲ့ အဇီဝ အသိဥာဏ်ရှိ စက်တွေ သုံးနိုင်ပြီဖြစ်သလို အခုထက် ပိုပြီး အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးနိုင်ဖို့လည်း ဆက်ပြီး ကြိုးပမ်းနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်..။သို့သော် အားနည်းချက် အားသားချက်များနှင့် စီးပွားရေးအရတွက်ခြေကိုက်မှုစတဲ့အချက်တွေကတော့စိမ်ခေါ်မှုတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်……။
Silicon Valley မှာ ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဟာ ကနဦးမှာ AI နည်းပညာကို ဘတ်ဂျက်အင်အားနည်းနည်း နဲ့ သာ လုပ်ကိုင်နေကြပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ မီးဖိုချောင်သုံးစက်ရုပ်တွေ၊ မော်တော်ကားလောကမှာ ရှေ့ထွက်လာတဲ့ Google Driverless Cars တွေ အပြီးမှာတော့ ရှိနေကြတဲ့ ဘတ်ဂျက်အင်အားတွေကို ထပ်မံပံ့ပိုးပြီး အင်အား တိုးတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းများစွာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်လွှားက AI ပါရဂူများ၊ မာစတာ တွေကိုလည်း ကုမ္ပဏီတွေလည်း အလုအယက်ခေါ်ယူလျက်ရှိတယ် လို့ သိရပါတယ်။
UAS ဆိုတာက unmanned aircraft system ရဲ့အတိုကောက်ပါ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်စနစ် ပေါ့ ဒီစနစ်မှာ
UAV , control station နဲ့data link ဆိုပြီးအဓိက ၃ ပိုင်းပါပါတယ် UAV က unmanned aircraft vehicle
ရဲ့ အတိုကောက်ပါ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် သို့drone လို့ လဲလူသိများပါတယ်။ UAV မှာအဓိက ၄ မျိုး ခွဲထားပါတယ်။ fixed wing UA တောင်ပံသေမောင်းသူမဲ့လေယာဉ် rotatory wing UA ဟယ်လီကော်ပတာလို rotar ပါတဲ့ယာဉ်၊ blimps လေသင်္ဘောလို လေထက်ပေါ့ပြီး နှေးနှေးရွေ့ တဲအမျိုးအစား flapping wing UA တောင်ပံကိုလှုပ်ခတ်နိုင်တဲ့ ယာဉ်အမျိုးအစား၊ ပျံသန်းမှုထိန်းချုပ်ရေးပိုင်းမှာ သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ လူ ပိုင်းလော့က တောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်တာ ဒါကို RPV remotely pilot venhicle လို့ ခေါ်ပါတယ်။ နောက်တမျိုးက semiautonomus ပါ သူကပျံတက်၊ပျံဆင်းချိန်နဲ့ လမ်းကြောင်းပြောင်းချိန် လက်နက်ပစ်ခတ်ချိန်လို critical point အရေးကြီးကာလတွေမှာပဲ လူကထိန်းပါတယ်။ နောက်တမျိုးကတော့autonomus ပါ ဒါကတော့အားလုံးမှာ on board flight computer ကို သုံးပြီး လူလုံးဝမထိန်းပဲ လုပ်ဆောင်ပါတယ် အဆင့်မြင့် AI နည်းပညာတွေဖြစ်တဲ့ fuzzy logic တို့neural network systemတို့ ကိုသုံးပါတယ် pre plan လုပ်ထားတဲ့ အမိန့် ကိုပေးရုံပါ။ ပြီးတော့ လူက ground station ကနေ monitor လုပ်ရုံပါ။ ယဉ်ပေါ်မှာ လောင်ဂျီကျူ့ ၊ လတ်တီကျု့ ကို GPS ကိုသုံးပြီးရပါတယ်။ Altitude အမြင့် ကိုတော့ infrared sensor နဲ့ရှာရပါတယ်။ stability အတွက် gyroscope ကိုသုံးပါတယ်။ payload သယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ mission type ပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားပါတယ။် ဒီဇိုင်းလဲ ကွဲမှာပါ။ ကင်မရာ ရေဒီယိုထရန်စမစ်တာ IR scanner များပါပါတယ်။ ground control station မြေပြင်အခြေစိုက်ထိန်းချုပ်ရေးခန်းက နေ လူကလိုအပ်တဲ့ ထိန်းချုပ် ညွှန်ကြားမှု ပေးပါတယ်။ ဒါကို C3 command, control and communication center လဲခေါ်ပါတယ်။
Data link မှာ upload link နဲ့ download link ဆိုပြီး၂ပိုင်းပါပါတယ် upload က မြေပြင်က နေယာဉ်ဆီကို ညွှန်ကြားပြီး download ကယာဉ်ကနေ မြေပြင်ဆီ real time data တွေကို ပြန်ပို့ ပါတယ် radio frequency ကို အဓိကသုံးပါတယ်။ အဓိကကျတဲ့ issue ကတော့ ဒီမှာ security ပိုင်း jamming ပိုင်းနဲ့ long rang remote control ပိုင်းပါ။ jamming ကတော့ ရန်သူ့အီလက်ထရွန်းနစ်စနစ်နဲ့နှောက်ယှက်မှုကို ခေါ်ပြီး ဒါကို ခံနိုင်ရေရှိဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်တခုကတော့ lunching and retrieving system မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကို ပစ်လွှတ်မှုနဲ့သိမ်းဆည်းမှုစနစ်ပါ။ မြေပြင်လေယာဉ်ကွင်းကနဆောင်ရွက်နိုင်သလို သင်္ဘော နဲ့ လေယာဉ်ပေါ်က နေလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကို 1916 မှာ လောရင့်နဲ့ စပယ်ရီက အမေရိကန်မှာ ပထမဆုံး စခဲ့ပြီး aviation torpedo လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အစ္စရေးက ယွမ်ကပူးစစ်ပွဲ အတွင်းမှာ အီဂျစ်နဲ့ ဆီးရီးယားရဲ့မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ် ဒုံးကျဉ်တွေကို UAV သုံးပြီး neutralised လုပ်နိင်ခဲ့ ပါတယ်။အမေရိကန်က ဗီယက်နမ် စစ်ပွဲမှာစသုံးပြီး desert storm မှာ အချိန်ပြည့် သုံးခဲ့ ပါတယ်။ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေမှာ နံမည်ကြီးကတော့ predator ပါ။ ဒီစနစ်ကို တောမီးလောင်ရာမှာ စိုက်ပျိုးရေး စနစ်တွေနဲ့ ၊ ရာသီဥတုစောင့် ကြည့်လေ့လာရေးတွေ၊ စစ်ပွဲမှာ သဘာဝဘေး အန္တာရာယ်ကာကွယ်ရေးမှာ စသဖြင့် dull, dirty and dangerous condition တွေမှာသုံးပါတယ်။
အမေရိကန်ကိုဖြုတ်ချနိုင်မဲ့….အခြေအနေရောက်ခဲ့ရပြီ…..တရုတ်ကိုထောင်ပေးတာ…ဘယ်သူထင်ပါသလဲ? တိန်လျှောက်ပိန် က…စီးပွားရေးထူထောင်ဖို့လုပ်တော့ Manufacturing လိုင်းကိုရွေးခဲ့တယ်….။
India က Service Sector လိုင်းကိုရွေးခဲ့တယ်….။
ကုန်ထုတ်ရင်…အဲဒီကုန်တွေကိုရောင်းဖို့…. ဈေးကွက်..market လိုပါတယ်။ ပိုက်ဆံအရှိဆုံး ဈေးကွက်က အမေရိကားမှာပါ။ ဒီတော့တရုတ်က ဒေါ်လာအတက်အကျကြောင့် သူ့ Export မထိခိုက်ရအောင် Monetary Independence ကို(စွန့်လွှတ်) ပြီး၊ ယွန်ကို ဒေါ်လာနဲ့(ချိန်း) လိုက်တယ်။ pegged လုပ်တယ်ခေါ်ပါတယ်။
အမေရိကားမှာရှိတဲ့ သောက်ပေါတွေက ဈေးပေါတဲ့ စီမှာထုတ်ကြဆိုတဲ့ Out sourcing ဆိုတဲ့ (အတွေး) က နံမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်၊ Globalization အရူးထလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့။ တရုတ်ကြီးက အမေရိကား Congress မှာ Lobbyists တွေ (ငှါး) ပြီး Most Favored Nation Status ရအောင်..လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ GM ရဲ့ oldsmobile စက်ရုံတရုတ်ပြည်မှာထောင်ခွင့်ပေးတယ်။ Boeing Jets တွေ စ၀ယ်တယ်။ Wall mart ကို တရုတ်ပြည်မှာ ဖွင့်ခွင့်ပေးပြီး၊ Wall Mart က သူ့ suppliers တွေကို တရုတ်ပြည်မှာထုတ်ဖို့ ဖိအားပေးတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ Lobbyists တွေက Congress မှာ..တရုတ်အတွက် Lobby လုပ်ကြတယ်။ တဖြေးဖြေး တရုတ်ပြည်ထွက်ပစ္စည်းတွေဟာ ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးလာတယ်။ ဂျပန်တောင် မခံနိုင်ဘူး။ တရုတ်က လည်သလားမပြောနဲ့။ ဂျပန်အတွက် ပစ္စည်းဆိုရင် Quality ကိုအထူးကရုစိုက်တယ်။ Rejects တွေဆို ဗမာပြည်နဲ့ အာဖရိကကို ပို့လိုက်တာ။
အနှစ် (၂၀) လောက်ကြာမှ Most favored nation status ကိုမလိုတော့။ မတောင်းဆိုတော့ဖူး။ အမေရိကန်တွေခင်ဗျာလည်း ဈေးပေါတဲ့ တရုတ် products တွေကို addict ဖြစ်နေပြီ။ Wall mart ဟာ တောမြို့ ကလေးတွေက Retail ဈေးကွက်ကိုလည်း ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ လူတွေ အလုပ်မရှိကြတော့ဘူး။ အမေရိကန် Economists နဲ့ လစ်ဖရယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေက Relative Advantage theory ကိုလက်ခံတယ်၊ အားပေးတယ်။ Absolute Advantage ကိုဂရုမပြုတော့ဘူး။ စက်ရုံတွေကိုဖြုတ်ပြီး ဈေးပေါတဲ့ mexico ကို ရွှေ့လူလည်ကြီးသားသမီး တရုတ်တွေက တိုင်ဝမ်နဲ့ပေါင်းပြီး၊ Mexico ကနေ တရုတ်ကိုရွှေ့နဲ့ (ငွေ) နဲ့ပေါက် အနိုင်ယူသွားတာ။
အရင်က..Solectron ဆိုတာ… Silicon Valley က (စ)ခဲ့တဲ့ Contract Farming Concept ပါ။ Manufacturing ကို Cisco တို့လိုကုမ္ပဏီတွေက အလုပ်ရှုပ်ခံမထုတ်တော့ဘူး။ Design ကိုပဲ အသားပေးတယ်။ Manufacturing experts တွေက ကုမ္ပဏီပေါင်းစုံကို တာဝန်ခံထုတ်ပေးတဲ့ Concept ပါ။ Solectron ကနေ evolution အရ အခု တိုင်ဝမ်ပိုင် Foxconn က Apple ရဲ့ iPhones တွေ တရုတ်ပြည်မှာထုတ်တယ်။ Oldmobiles နဲ့ Audi စက်ရုံတွေကို Invest လုပ်လိုက်တာ၊ အခု တရုတ်တွေ ကားထုတ်နိုင်ပြီ။ Boeing ကိုဝယ်တော့ တရုတ်က သူတို့စီမှာထုတ်ရမယ်လို့ တောင်းဆိုတယ်။
အခု…. Short range jets တွေထုတ်နိုင်ပြီ။ Youtube ကနေသာ ခေါက်ပြီးရှာဗျာ။ တဖြေးဖြေး Long range jets တွေထုတ်လိမ့်မယ်။ တရုတ်တွေ ချမ်းသာလာတော့ Military ကို budget နစ်တိုင်းတိုးလာလိုက်တာ၊ အခု တရုတ်စစ်တပ်က professional army ဖြစ်လာပြီ။ Human Wave မသုံးတော့ဘူး။ အမေရိကန်ကို challenge လုပ်နိုင်တော့မယ်။ Relative Advantage က ဘာဆိုသလဲဆိုတော့ စက်ရုံတွေ တရုတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်။ တရုတ်တွေ ပိုက်ဆံရှိလာတယ်။ ပိုက်ဆံပိုရှိလာတော့ (ငွေ) နဲ့ (ငွေ) ကိုပြန်ရှာရတယ်။ ဘယ်မှာ ရှာမှာလဲ? Wall Street မှာပဲ လာရင်းရတယ်။ ဒီတော့ ဒေါ်လာ တစ်သောင်းပေးရမဲ့ အလုပ်သမားတွေအစား ဒေါ်လာတစ်သိန်းရတဲ့ Wall St က ဥာဏအလုပ်သမားတွေ တိုးလာတယ်။ တရုတ်တွေ လျှင်တာက (ပေးစား) ထိုးကြွေးလိုက်တယ်။ အခု Hong Kong ကို ပထမ Financial Center ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပြီ။ ၁၅နှစ်လောက်ဆိုရင် တရုပ်ရဲ့ စီးပွားရေးက Wall St ကိုကျော်တက်နိုင်စရာရှိတယ်။
အမေရိကန်က နှစ်ပေါင်းများစွာ Global Economics ကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်။ Wealth Creation အကြာကြီး လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် သူ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာ ချမ်းသာနေပြီမို့၊ Export ကို.အားကိုရတဲ့. နိုင်ငံမဟုတ် Domestic Consumption နဲ့ရပ်တည်နိုင်တယ်။ တရုတ်ကြီးက ချမ်းသာလာတော့ သူ့နိုင်ငံက ချမ်းသာတဲ့သူတွေက Luxury Goods တွေဝယ်လာကြတယ်။ အခု တရုတ်က..luxury goods တွေထုတ်မယ်။ Financial Sector ကို ၀င်လွှမ်းမိုးတော့မယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်က Export Oriented ကနေ Consumer Oriented Economy ကိုပြောင်းနေပြီ။ ဒါအတွက် Economic Infrastructure အသစ်တွေလိုလာတယ်။ ယွန် ဟာ hard currency ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့် Yuan Internationalization လုပ်လာပြီ။ Yuan တွေ ကမ္ဘာအနှံ့ပြန့်နေဖို့လိုတာမို့ပါ။ ဒါကြောင့် …Currency Swap လုပ်ပြီး Yuan Distribution Centers တွေ ကမ္ဘာ့မြို့ကြီးတွေမှာဖွင့်ခဲ့တာ ၃၊၄ နှစ်ရှိပြီ။ Hong Kong – Shanghai connected Dual market ကို ဖွင့်ကစားလာတယ်။ Shanghai Financial SEZ ကိုဖွင့်ပြီး Exchange Free Flow လုပ်ခွင့်ပေးလာတယ်။ One Belt One Road ဆိုတာက Excess Products တွေကို developing nations တွေကိုရောင်းမှာ တဖက်ကလည်း တရုတ် Domination ကို trade နဲ့ sustain လုပ်ဖို့ဆန်းကြည့်တာ hedge funds တွေရဲ့ manipulation ကိုကြောက်လို့၊ Dollar based – Petro Dollar scheme ကို စဖျက်လာပြီ။ ဒါတွေအားလုံးဟာ Dollar Domination ကို (စ) တိုက်တာပဲ။ တရုတ်တွေက အလွန်စိတ်ရှည်တယ်။ Long Term ကြည့်နိုင်တယ်။ တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေက (ဥာဏ်) ရှိတယ်။ Meritocracy ကိုကျင့်သုံးပြီး ခေါင်းဆောင်တွေကို ပါတီက ပိုးမွေးသလို မွေးတာကိုး၊
အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမားတွေက အရွေးကောက်ခံရဖို့ပဲကြည့်နိုင်တယ်။ Short term ကိုပဲ ဦးစားပေးလွန်းတယ်။ One man One vote ကြောင့် Illegal Aliens တွေကို အတင်းလက်ခံဖို့ ကြိုးစားလာကြတယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ Self Destruction က Extreme Liberalism ပဲ။ အမေရိကန်ရဲ့ (အားသာ) ချက်က INNOVATION ပါပဲ။ အချက်ခြာကျတဲ့နေရာကတော့ Innovation Mecca ကတော့ Silicon Valley ပါပဲ။ Innovation Advantage ပျောက်သွားရင်…. အမေရိကန်တွေကို တရုတ်တွေကျော်တက်တဲ့နေပါပဲ။
အသေအခြာ..စဉ်းစာတတ်ရင် Capitalism ဟာ (လောဘ) ကို (အခြေခံ) တယ်။ တရုတ်က(ငွေ) ပေးပြီး အမေရိကန်က စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို(၀ယ်) ယူလိုက်တယ်။ တရုတ်ပြည်မှာ Corruption ရှိတယ်။ ဒါကစနစ်အရ ကွန်မြူနစ်တွေလာဘ်စားတာ Economic Corruption, Moral Corruption မဟုတ်ဘူး။ (ငွေ) အတွက် (တိုင်းပြည်) ကို ရောင်းမစားတာကို ဆိုလိုတာပါ။ အမေရိကန်တွေက (ငွေ)အတွက် ရောင်းစားရင်း တိုင်းပြည်ပါ ပါသွားတာကို (မသိ) လိုက်ဖူး။
(စနစ်) တစ်ခုရဲ့ (ပျက်စီး) ခြင်းဟာ (စနစ်) အထဲ ပါလာတယ်ဆိုတာကို လူငယ်လေးတွေကို (သိ) စေချင်တာပါ။
အမေရိကန်ကိုဖျက်စီးမဲ့ တရုတ်ကြီးကို မြေထောင်မြှောက်ပေးတာ အမေရိကန်တွေပဲ။
ကိုယ့်အမျိုးကိုဖျက်မဲ့သူဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာလောက်သိထားသင့်တယ်။ ဒါကြောင့် စာများများဖတ်ကြပါ။ လေ့လာကြပါလို့ဆရာကြီးဦးအောင်သင်းက ခဏခဏမှာနေတာပေါ့….။
(ဉာဏ်) မမှီကြတော့…. ဘန်ဘူးအပေးခံရမှာကိုတောင် (မသိ) ကြရှာဘူး။
ဗမာလူငယ်တွေ (ဉာဏ်) မနဲကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ……………………………..
အခုပို့စ်က တောင်းဆိုထားလို့ ရှာဖတ်ပြီးရေးပေးတာပါ ။ ဒါနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ထပ်သိချင်တာရှိရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်ကိုမေးပါ reference က IJERCET ခေါ်တဲ့ computer engeneering နဲ့ technology စာစောင်က researchpaper ကိုမှီးပါတယ်။
(၃)Science & Technology(VOA)ဒေါက်တာပဒေသာတင်အင်တာဗျူး...
Posted by Alex Aung at 4:48 AM No comments:
Labels: News and Info, နည်းပညာ
⚠️လျှပ်စစ်အသားပေါင်းအိုး အသုံးပြုမည့်သူများ သိထားရမည့် အချက် (၁၁)ချက်⚠️
၁)✔ပထမဦးစွာ ဘာမှ မချက်မကိုင် ပလပ်မထိုးမှီ အိုးအဖုံး ဖွင့်နည်းလေးအရင်ပြောချင်ပါတယ်... (လွယ်ပေမယ့် သေချာစေချင်လို့ပါ) အိုးအဖုံး ကိုင်းကိုကိုင်ပြီး နာရီလက်တံသွားတဲ့ အတိုင်း (ညာဘက်ကို) အရစ်ဆုံးသွားတဲ့အထိလှည့်ပါ...ပြီးရင် ကိုင်းကနေ "မ"လိုက်တာနဲ့ ပွင့်သွားပါပြီ✔
၂)✔ပြီးမှ အိုးအတွင်းသားကိုအပြင်ထုတ်ပြီး မိမိချက်ချင်တဲ့ အစားအစာ, အသားငါး အနှစ်အစာပလာကို လိုအပ်သလို ထည့်ပါ✔
၃)✔ထည့်ပြီးလို့ အိုးအတွင်းသားကို ပြန်ထည့်တော့မယ်ဆိုရင် အိုးရဲ့ အတွင်းကွိုင်ပတ်လည်ကို အဝတ်ခြောက်နဲ့ အမှိုက်မရှိရလေအောင် မညစ်ပတ်လေအောင်သေချာသုတ်ပေးပါ.. အဝတ်စတွေ မကျကျန်အောင်လည်း ဂရုစိုက်ပါ (အမှိုက်ခြောက်တို့ အဝတ်စတို့က ကွိုင်ပူလာရင် လောင်ကျွမ်းနိုင်လို့ပါ အန္တရာယ်ရယ်လို့မရှိပေမယ့် ကြာရှည်ခံအောင် အသုံးပြုနိုင်ရန်ပါ)✔
၄)✔ပြီးတာနဲ့ အိုးအတွင်းသားကိုပြန်ထည့်ပါ... နောက်တစ်ခုက အရေးကြီးတဲ့ အဖုံးပိတ်ခြင်းပါ✔
၅)✔အဖုံးကို ဖွင့်တုန်းက အတိုင်း ကျအောင်ဖိပိတ်ပြီးနာရီလက်တံ ပြောင်းပြန် အတိုင်းလှည့်၍ အထစ်ကလေး အဆုံးထိ ရောက်တဲ့အထိ (ကလစ်)လို့ အသံမည်အောင်ပိတ်ပါ... အဖုံးကျမကျသေချာချင်ရင် ကိုင်းကနေဆွဲပြီး အိုးကိုမကြည့်ပါ...
(အိုးတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုတော့ မြည်တဲ့ အသံမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်... ယေဘူယျအားဖြင့် အသုံးများတဲ့ Brandနဲ့ ပစ္စည်းကို ဦးစားပေးပြောထားတာပါ)✔
၆)✔အခုကတော့ လေထွက်ဘုလေးထားရမယ့် အနေအထားလေးပြောပြပါ့မယ်...လေထွက်ဘုလေးကို အမြင့်မတင်ထားပဲ(ဆွဲမထုတ်ထားပဲ) ပိတ်တဲ့ကလစ်ရှိတဲ့ဘက် အိုးရဲ့ဘယ်ဘက်ကို လှည့်ထားပေးရပါ့မယ်
(အိုးတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုဒီဇိုင်းမတူတဲ့အတွက်... ယေဘူယျအားဖြင့် အသုံးများတဲ့ Brandနဲ့ ပစ္စည်းကို ဦးစားပေးပြောထားတာပါ)✔
၇)✔အခုကတော့ မီးကြိုးကိုအိုးအထိုင်မှာတစ်ဖက် သေချာတပ်ပြီး မီးပလပ်ကို မီးပလပ်ပေါက်မှာသေချာတပ်ပါ (နှစ်ဖက်စလုံး ချောင်မနေ looseမဖြစ်ဖို့ သတိထားပါ) မီးပလပ်တပ်လိုက်ပြီး မီးဝင်သွားတာနဲ့ Heatingဆိုတဲ့ အကွက်က မီးလင်းလာပါလိမ့်မယ်✔
၈)✔တစ်ချို့အိုးတွေက ဒီဂျစ်တယ်အကွက်ပါပြီး တစ်ချို့က ဘုလုံးလှည့်ရတာပါ(analogပေါ့) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာ ၁နာရီဆို ၁နာရီ၊ ၄၅မိနစ်ဆို ၄၅မိနစ် လှည့်ရုံ နှိပ်ရုံချိန်ရုံပါပဲ✔
၉)✔အချိန်ပေးလိုက်တာနဲ့ ဘုလုံးလှည့်လိုက်တာနဲ့ Heatingဆိုတဲ့ နေရာမှာ မီးဆက်ပြနေပြီး နောက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အထဲမှာ လိုအပ်တဲ့ pressure ဖိအား ရလာပြီဆိုရင် Holding Pressure ဆိုတဲ့ မီးစိမ်းလေးကိုပြောင်းလင်းလာပါလိမ့်မယ်...
၁၀)✔အချိန်ပြည့်လို့ တက်သွားရင် Keep Warmဆိုတဲ့ အကွက်ကမီးလေး လင်းလာပါလိမ့်မယ်...အိုးတော်တော်များများမှာ ("ကလစ်" "ကလင်") ဆိုတဲ့ အချက်ပေးအသံလေးတွေပါမြည်ကြပါတယ်...(မခက်ပါဘူး ထမင်းပေါင်းအိုးတည်သလိုမျိုးပါပဲ)✔
Keep Warmမီးလင်းလာပြီး တက်သွား အချိန်ပြည့်သွားကြောင်းပြတာနဲ့ တန်းပြီး ထမင်းပေါင်းအိုးလို ကျက်ပြီဆိုပြီးလည်း မဖွင့်ပါနဲ့ ...ကျက်လားမကျက်လား ရေလိုလား ခန်းလားကြည့်ချင်စိတ်နဲ့ ချက်ချင်း ဖွင့်မကြည့်ပါနဲ့ 🚫 ဖွင့်ကြည့်လည်းဖွင့်လို့မရပါဘူး
အထဲမှာ လေဖိအားအပြည့်ရှိလို့ အဖုံးကို အိုးက စုပ်ယူထားသလိုဖြစ်နေလို့ပါ(အတင်းအဓမ္မတော့ဆောက်နဲ့ထွင်းဖွင့်စရာမလိုအပ်ပါဘူး)🚫
အချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အပေါ်မှာ လှည့်ခဲ့တဲ့ ဘုလေးကို အပေါ်ကိုဆွဲတင်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် (ဆန့်ကျင်ဖက်ဘက်)တစ်ခြားဘက်ကိုလှည့်ပေးလိုက်ရင် "ရှူး" ဆိုပြီး အသံနဲ့တကွ လေများစွာ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်🔹️
❎ဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တာက လေထုတ်ပေးတဲ့ဘုကို သွားလှည့်တဲ့အခါ ဘုကိုကိုင်တဲ့အခါ အပေါ်ကနေသွားမကိုင်ပါနဲ့ အငွေ့ထွက်ရင် ပူမှာဆိုးလို့ပါ... ဖြည်းဖြည်းလေး တို့ကနဲ ဆိတ်ကနဲ မဝံ့မရဲလည်း မကိုင်ပါနဲ့ (ဘာအန္တရယ်မှ မရှိပေမယ့် ကိုယ်က ကြောက်တတ် လန့်တတ်သူဆို ရှူးဆိုတဲ့ အသံနဲ့ အငွေ့ကြောင့် လန့်သွားနိုင်လို့ပါ)❎
ဘုဘေးနားကို ထိထိမိမိကိုင်ပြီး ဆန့်ကျင်ဖက် ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပါ.. လက်လည်းမပူ လန့်လည်းလန့်စရာမလိုတော့ပါဘူး🔹️
၁၁)✔အငွေ့များကုန်တဲ့ အထိစောင့်ပြီးတဲ့ အခါကျမှ ခလုတ်ပိတ် မီးပလပ်ဖြုတ်ပြီး ပုံမှန်ဖွင့်နေကျအတိုင်း (နာရီလက်တံသွားတဲ့အတိုင်း) ဖွင့်ပြီး ကျက်မကျက် နူးမနူး ရေလိုမလို သေချာကြည့်ပြီး Readyဆိုစားဖို့ပြင်ပြီး လိုအပ်တာရှိရင် ပုံမှန်အတိုင်း ပိတ် ပလပ်ပြန်တပ် အချိန်ပြန်ပေးပြီး keep warmဖြစ်တဲ့ အထိစောင့်ပါ✔
ကိုယ်ကနူးလောက်ပြီ ထင်လို့ offလိုက်လဲရပါတယ်
✴အဓိကက ပိတ်ပြီးချိန်တိုင်း အဖုံးမဖွင့်ခင် လေထုတ်ဖို့ပါပဲ✴
ဒီလောက်ဆို အိမ်ရှင်မ👩‍🍳 အိမ်ရှင်ထီး👨‍🍳များ ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ မဖြစ်သင့် မလုပ်သင့်တာတွေ အတွက် ပြည့်စုံမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်...🤩🤩🤩
➡️ခုရေးသားထားတဲ့ အကြောင်းရာတွေက မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအတွက် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုရတယ်ဆိုရင်ပဲကျေနပ်ပါပြီ... မိတ်ဆွေလိုပဲ အခြားသူများလည်း သိခွင့်ရအောင် share လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ် ...➡️➡️➡️
🌐 New World Wholesale 🌐
#list #pressurecooker #eleven
Labels: Recipes, ဗဟုသုတ
ဒီတစ်ပတ်ဆောင်းပါးကတော့ 2018 ထိ ရှိနေတဲ့ Mirrorless Camera တွေထဲကမှ Video အတွက်ကို သင့်တော်တဲ့ Camera တွေ အကြောင်းတွေနဲ့ သူတို့ List ကို ရေးပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ Video ပိုင်းတွက်ကို များသောအားဖြင့် DSLR တွေကို သိပ်မသုံးကြတော့တာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Function ပိုင်း အားသာတာတွေအပြင် နည်းပညာ Innovative ဖြစ်မှုတွေဟာ Mirrorless တွေဟာ တော်တော်လေး ရှေ့ပြေးကြပါတယ်။ ဆိုတော့ Video ပိုင်းအတွက်ကို Mirrorless Camera ၀ယ်ချင်တဲ့သူများအတွက် ရွေးချယ်ရ အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ရန် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံးတစ်လုံးကတော့ Sony ရဲ့ Alpha Series ထဲမှ A7s II ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ a7s series တွေဟာ Video အတွက်ကို နာမည်တော်တော်လေးကြီးတဲ့ Camera တွေပါ။ Full Frame Sensor ဖြစ်ပြီး 4K Resolution ထိ ရိုက်ကူးလို့ ရပါတယ်။ Low Light Performance နဲ့ High ISO Quality ကလဲ Mirrorless Camera တွေထဲမှာ နေရာတစ်နေရာ ကောင်းကောင်းယူထားနိုင်တဲ့ Camera လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Slow Motion မှာတော့ 120fps ထိ ရိုက်ကူးလို့ ရပါတယ်။ Full HD Resolution အပြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ A7s II ကတော့ Industry Standard မှာ လိုအပ်မယ့် Function တွေကို အကုန်ထည့်ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ Video အတွက် ဆိုတဲ့အတိုင်း Photo Resolution ဟာတော့ 12.2mp ပဲ ပါပါတယ်။ ဒါကလဲ 4K အတွက် အေးဆေးလုံလောက်သေးတဲ့ Resolution ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကတော့ မြန်မာငွေ သိန်း 30 ကျော်ရှိတဲ့အတွက် နည်းနည်းတော့ များပါတယ်။
နောက်တစ်လုံးကတော့ Canon Eos M5 ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Canon ဟာ Mirrorless Camera တွေမှာ သိပ်အောင်မြင်ခဲ့တာမျိုး မရှ်ိပေမယ့် EOS M5 ဟာတော့ Photo Video ပိုင်း မျှမျှတတရှိတဲ့ Camera တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ Photo Resolution ကတော့ 24.2MP ပါရှိပြီး 1080p ကို 60fps နဲ့ ရိုက်ကူးလို့ ရပါတယ်။ ဒီ Camera က Video ပိုင်းအတွက်ကို အရမ်း Focus လုပ်ထားတဲ့ ပုံစံတော့မဟုတ်ပေမယ့် ဈေးအတော်အသင့်နဲ့ တော်ရုံ Video Mirrorless Camera တစ်လုံးတော့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကလဲ 15 သိန်းဝန်းကျင်ပဲ ရှိပါတယ်။
နောက်တစ်လုံးကတော့ Panasonic ဘက်က ဖြစ်ပါတယ်။ Lumix GH5 ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Camera ကတော့ 2018 မှာ အပေါက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Camera ပါ။ Mirrorless Camera ထပ် Mini Cinema Camera လေးလို ခံစားရစေတဲ့ Function တွေနဲ့ Camera လေး ဖြစ်ပါတယ်။ 4:2:2 10bit Recording တွေ 4K 60fps တွေ 180fps Slow Motion တွေရရှိတဲ့ ပထမဆုံး Camera လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Anamorphic Mode တွေပါ ပါတဲ့အတွက် ဒီ Camera လေးဟာ တော်တော်လေး Video အထူးပြု Camera လေး ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Mirrorless တွေ DSLR တွေမှာ ဘယ်တော့မှ မရခဲ့တဲ့ Long Time Recording ကိုလဲ Battery မကုန်မချင်း ရိုက်နိုင်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကတော့ Body Only 24 သိန်းကျော် ရှိပါတယ်။
နောက်ထပ်တစ်လုံးကတော့ FujiFilm ကပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူလဲ Video ကို ဦးစားပေးပြီး ထွက်လာတဲ့ Camera ဖြစ်ပါတယ်။ Fujifilm XH 1 ပါ။ Photo Resolution ကတော့ 24.3mp ရှိပါတယ်။ Video ပိုင်းအရတော့ Internal မှာ DCI 4K လို့ခေါ်တဲ့ Cinema Aspect Ratio နဲ့ 4K ကို ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။ 4096 x 2160 resolution နဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်သွားပါတယ်။ Slowmotion အနေနဲ့ Full HD မှာ 120fps ထိ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ Mirrorless Pro Line မှာ Standard ရှိသင့်တဲ့ အနေအထားပါပဲ။ ရှေ့က A7s II ရော GH5 (ထပ်ဝယ်ယူလို့ရတဲ့) ရောမှာပါတဲ့ LOG mode တွေလိုဖြစ်တဲ့ Fujifilm ရဲ့ F Log Gamma mode ပါပါတယ်။ ဈေးကတော့ $1900 ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာငွေ သိန်း 30 ၀န်းကျင်လောက်ပဲ ပြန်ဖြစ်မှာပါ။
ဒီနေ့ရေးသွားတာတွေကတော့ Brand အစုံမှာ ရှိနေကြတဲ့ Mirrorless Camera တွေရဲ့ Video Centric Pro Line Up Camera တွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဈေးလေးတွေက အနည်းငယ်ကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ Camera တွေကတော့ ပေးတာနဲ့တန်မယ့် Camera တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဆောင်းပါးရှင် - ဖြိုးဇံ (NetGuide Journal)
Posted by Alex Aung at 5:28 AM No comments:
အိမ်​​ထောင်​ပြုရန်​ ဆန္ဒရှိ​နေကြ သာ
အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများလည်း ​လေ့လာပြီးကြပီးလား ?
ပညာတတ်ပြီး အသိာဏ်ရှိတဲ့ ဇနီးမယားရဲ့
တန်ဖိုးဟာ လူတကာအလယ်မှာ တင့်တယ်ပါတယ်..
ဇနီး မယားတစ်ယောက်ရထားရင်တော့ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့
ဘာသာတရားနဲ့ နှစ်သိမ့်ပေးနိုင်တဲ့ ဇနိီးကတော့
မိန်းမသား သဘာဝအားငယ်ချိန်မှာ ...
တိုင်ပင်စရာ ကိစ္စရပ်တွေမှာ အစ်ကိုတစ်ယောက်လို..
ခွင့်လွှတ်ရမယ့် အရာတွေမှာ မောင်တစ်ယောက်လို..
ဝါသနာတူတဲ့ အလုပ်တွေလုပ်ချိန်မှာ သူငယ်ချင်းလို...
ခူးခပ် ​ကျွေးမွေးချိန်မှာ သားငယ်တစ်ယောက်လို...
ပြုစု ယုယချိန်မှာ ချစ်သူတစ်ယောက်လို....
ခင်ပွန်းနှုတ်က ဖွင့်ဟစရာမလိုဘဲ သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကို
(၁) ဇနီးမယားအား မထီလေးစား မပြုခြင်း၊
(၂) ဇနီးမယားအား ရှာဖွေရသမျှ ဥစ္စာများကို အပ်နှံခြင်၊
(၃) မိမိ ဇနီးမယားမှ တစ်ပါး အခြားမိန်းမများနှင့် ဖောက်ပြား
(၄) ဇနီးမယားအား အခါအားလျော်စွာ အ၀တ်အစား
(၅) ဇနီးမယားအား မြတ်နိုးကြင်နာစွာ ဆက်ဆံခြင်း။
(၁) မိမိ ဇနီးမယားအား မထီလေးစား မပြုခြင်း
ကိုယ့်ဇနီး ကို အများသူငါရှေ့ မှာ အော်ငေါက်တာတွေ ၊
ဆဲဆိုတာတွေ ၊ အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာ အကြောင်းမရှိ
အကြောင်းရှာပြီး လူအထင်သေးမဲ့ ၊ သိမ်ငယ်စေမဲ့
ကိစ္စတွေ ပြောဆိုတာမျိုး ရှောင်ကြဉ်ပြီးတော့ ဇနီးမယားရဲ့ အပြုအစု အယုအယ ကောင်းကြောင်း ၊ တော်ကြောင်း ၊
တတ်ကြာင်း ၊ အနစ်နာခံ ၊ သည်းခံခွင့်လွှတ်တတ်ကြောင်း အစရှိတဲ့ ဇနီးမယား ဂုဏ်တက်စေမဲ့ အကြောင်းကိစ္စမျိုးကို
ကြံဖန်ရှာဖွေပြီး အခါအခွင့်သင့်တိုင်း ပြောဆိုပေးတာကို
ဆိုလိုပါတယ်။ ကိုယ့်မိန်းမကို နှုတ်၏ စောင်မခြင်းဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။ မိမိ ဇနီးကို ကိုယ့်ရဲ့ ကြင်နာမှု​တွေ ၊​နွေးထွေးမှုတွေကို အများသူငါရှေ့ မှာ ထုတ်ဖော်ပြသတာမျိုးပေါ့။
(၂) မိမိ ဇနီးမယားအား ရှာဖွေရသမျှ ဥစ္စာများကို အပ်နှံခြင်၊
လခစား ဖြစ်ရင်လည်း လခစားအလျောက် ၊
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး သမားဆိုရင်လည်း ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးသမား အလျောက် ရလာတဲ့ လခ၊ အကျိုးအမြတ်တွေကို
စာရင်းဇယားနှင့်တစ်ကွ မိန်းမကို ပေးအပ်ရပါမယ်။
ပြီးတော့မှ ဇနီးမယားဆီက မိမိ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သုံးဖို့ 
စွဲဖို့ အတွက် ဘယ်ရွေ့ ဘယ်မျှ လိုအပ်ကြောင်း ဖြစ်နိုင်ရင် စာရင်းနဲ့ ပြန်တောင်းတာမျိုး ကို ဆိုလိုပါတယ်။ အဲသလို
စာရင်းဇယားနဲ့ ပြတော့ ဇနီးမယားကလည်း ၀င်ငွေ
ဘယ်လောက် ရှိသလဲ ၊ အသုံးစရိတ် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ဆိုတာကို တွက်ချက်နိုင်ပြီးတော့ စုသင့်တာစု ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်တာ မြှုပ်နှံ ၊ ပေးကမ်းစရာ ရှိတာ ပေးကမ်း အစရှိတာ
(၃) မိမိ ဇနီးမယားမှတစ်ပါး အခြားမိန်းမများနှင့်
ဖောက်ပြား ကျူးလွန်မှု မရှိခြင်း၊
တိတ်တိတ်ပုန်း အမြှောင်မယား ထားတာတွေ၊
ကိုယ့်လက်အောက်က ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ဖောက်ပြားတာတွေ၊ အခြားသော လင်ရှိမယားတွေနဲ့ဖောက်ပြန်တာတွေ ၊
​ရှောင်ကြဉ်တာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ တစ်ချို့သဘောထာ
ကြီးတဲ့ မိန်းမ​တွေကတော့ ကိုယ်ဝန် ရှိနေတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကိုယ့်ယောက်ျား ကို ချုပ်ခြယ်တာမျိုး မလုပ်ဘဲ ခွင့်လွှတ်ကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ ၂ ဦး ၂ဖက် ကြိုတင် ညှိနှိုင်းထားကြ
(၄) မိမိ ဇနီးမယားအား အခါအားလျော်စွာ အ၀တ်အစား
ကိုယ့်ဇနီးကို ချစ်သူများနေ့ တို့ ၊ မွေးနေ့ တို့ ၊ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ တို့အစရှိတဲ့ အမှတ်တရနေ့​တွေမှာ အချိန်သတ်သတ်ပေးပြီး
အပြင်လျှောက်လည်တာတွေ၊ အမှတ်တယ ဖြစ်စေမဲ့
ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းတွေ ၊ အ၀တ်အထည်ဆန်းတွေ၊ sexy ဖြစ်တဲ့ lyngerie အ၀တ်အစားတွေ အဲဒီလို နေ့ တွေမှာ ၀ယ်ပေးတာတွေ လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဇနီးအပေါ်မှာ
အချစ်မပျက်ကြောင်း ၊ မှတ်မှတ်ယယ ရှိနေကြောင်း
ပြသတာမျိုး ကို ဆိုလိုပါတယ်။
(၅) မိမိ ဇနီးမယားအား မြတ်နိုးကြင်နာစွာ ဆက်ဆံခြင်း။
ချစ်သူကနေ ဇနီးမယား ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ သူတွေဆိုရင်လည်း ကိုယ့်မိန်းမ ကို စချစ်ခဲ့တုန်းကလိုပဲ အကြင်နာမျက်လုံးတွေနဲ့ တစ်ယုတစ်ယ ထွေးထွေးပွေ့ ပွေ့ ၊ ကြင်ကြင်နာနာ ဆက်ဆံတာမျိုး ၊ မိဘတွေကြောင့် မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ရတဲ့ သူတွေဆိုရင်လည်း အရင်တုန်းက ဘယ်လိုပဲ ချစ်သူတွေ ရှိခဲ့ပါစေ.. လက်ရှိ ကိုယ့်ဇနီးကိုပဲ သစ္စာရှိရှိ ၊ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ပေါင်းသင်းတာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ အခန့် မသင့်လို့ စကားများ ရန်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ငါ့ အရင်ရည်းစားက နင့်လို မဟုတ်ဘူး.. ငါ့အပေါ် ဘယ်လောက် သည်းခံ ဂရုစိုက်တယ် ဆိုတာတွေ ပြောဆိုတာမျိုး ရှောင်ကြဉ်သင့်သလို
ငယ်ကျိုးငယ်နာ ဖော်ပြီး ပြောဆိုတာမျိုး ကိုလည်း
၀တ်ငါးဆူ အိမ်သူ ကျင့်အပ်စွာ။
(၁) အိမ်မှုကိစ္စများကို အဆင်ပြေစေရန် စီမံခန့် ခွဲ
(၂) မိမိလင်ယောက်ျား အပ်နှံလာသော ဥစ္စာများကို
စနစ်တကျ သိမ်းဆည်း ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
(၃) မိမိယောက်ျားမှ တစ်ပါး အခြားသော ယောက်ျားတို့နှင့်
ကာမအမှု ကိစ္စတွင် ဖောက်ပြန်မှု မရှိခြင်း၊
(၄) မိမိဘက်မှဆွေမျိုး ၊ လင်သားဘက်မှ ဆွေမျိုးတို့၌
မျှမျှ တတ ပေးကမ်းရခြင်း၊
(၅) လုပ်ငန်းကိစ္စ အ၀၀၌ ပျင်းရိခြင်းကင်း၍
(၁) အိမ်မှုကိစ္စများကို အဆင်ပြေစေရန် စီမံခန့်ခွဲ ပြုလုပ်ခြင်း
ခင်ပွန်းသည် အိပ်ရာက မထခင် ခင်ပွန်းသည်အတွက်
နံနက်စာ စီစဉ်ပေးတာ ၊ ခင်ပွန်းသည် နိုးလာရင်လည်း
သွားတိုက်တံ ၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ အစရှိတာတွေ အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ပေးထားတာ ၊ နှစ်ဖက် မိဘတွေ ၊ ဆွေမျိုးတွေ
ကိုယ့်အိမ်မှာ ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်ထားရင် သူတို့​တွေ
အတွက် မလစ်ဟင်းရအောင် ၊ အိမ်ကို ကြည့်ချင်စဖွယ် ၊
​နေခြင်စဖွယ် ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်တာတွေ၊ ယိုယွင်းပျက်စီး
​နေတာတွေကို စွန့်ပြစ်တန် စွန့်ပြစ်၊ ပြင်သင့်တာပြင် ၊
ခင်ပွန်းသည် ရှာသမျှ နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်က မထွက်ရ
​အောင် စီမံခန့်ခွဲတာ၊ အိမ်စေရှိရင်လည်း မနက်စောစော
အိပ်ရာမှ မထခြင်ရင်တောင်မှ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်
အစီအစဉ်တွေကို ကြိုတင်ပြောပြပြီး အလုပ်တွေကို
သင့်လျော်သလို စီမံ ခန့် ခွဲတာတွေကို ပြုလုပ်စေခြင်းပါပဲ။ ညအိပ်ရင်လည်း ခင်ပွန်းသည်ထက် စောပြီးအိပ်တာမျိုး
မဟုတ်ဘဲ အတူတူဖြစ်စေ ၊ နောက်ကျပြီးမှ ဖြစ်စေ
အိပ်ရာဝင်တာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်။ နောက်ကျမှ အိပ်​ရာဝင်​တာကလည်း အိမ်တံခါးတွေ လုံခြံအောင် ပိတ်ရဲ့ လား အစရှိသဖြင့် ခင်ပွန်းသည်တွေ လစ်ဟင်းနေတဲ့ အရာတွေကို
ခင်ပွန်းသည် ရှာဖွေပေးလာတဲ့ ငွေကြေး ဆိုရင်လည်း
မပျောက်ပျက်အောင် ၊ တိုးပွားလာအောင် ၊ လှူသင့်တာ
လှူရအောင် အသုံးချတတ်ရပါမယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုရင်
လည်း ယိုယွင်းမှုနည်းအောင်၊ စနစ်တကျ ရှိနေအောင်၊
​ခေတ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေအောင်၊ခင်ပွန်းသည် အကြိုက်
လည်းဖြစ် ၊ကိုယ့်အကြိုက်လည်း ဖြစ်မယ့် ဟာတွေကို
တိုင်တိုင်ပင်ပင် စုဆောင်းတာမျိုး လုပ်တတ်တာမျိုးပေါ့။
(၃) မိမိခင်ပွန်း မှတစ်ပါး အခြားသော ယောက်ျားတို့နှင့်
ကာမအမှု တွင် ဖောက်ပြန်မှု မရှိခြင်း၊
ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ ဖြစ်စေ ၊ မျက်မှောက်မှာပဲ ဖြစ်စေ
ကိုယ့်ခင်ပွန်းမှ တစ်ပါး တစ်ခြားသူတွေနဲ့ဖောက်လွဲ
​ဖောက်ပြန် အကျင့်တန်တဲ့ ကိစ္စတွေ ရှောင်ကြဉ်တာမျိုး ဆိုလိုပါတယ်။
ကိုယ့်ဘက်မှ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို ၁ သိန်း ထောက်ပံ့ရင် ခင်ပွန်းဘက်က ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုလည်း ၁သိန်း
​ထောက်ပံ့တာမျိုး၊ သီတင်းကျွတ် ၊ တန်ဆောင်တိုင်မှာ
လူကြီး မိဘတွေကို ကန်တော့ရင် နှစ်ဘက် မိဘတွေ ၊
​ဆွေမျိုးစုတွေကို မျှမျှတတ ဆက်ဆံ ပေးကမ်း ထောက်ပံ့ တာမျိုး ပြုလုပ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။
အမှုကိစ္စပေါ်ပေါက်လို့ ရှိရင် ခင်ပွန်းသည်ကိုချည်းပဲ အားကိုးမနေဘဲ ကိုယ်တိုင် လုပ်တတ်ရင် ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်တာမျိုး၊ ကိုယ်တိုင်မလုပ်တတ်ရင်လည်း တတ်တဲ့သူ တစ်ယောက်
​ယောက်ကို ငွေပေးပြီး ခိုင်းစေတာမျိုး ၊ နိုးနိုးကြားကြား
" မောင်ရေ .. သည်းလေး ဒီမှာ ကိုရီးယားကား ကြည့်နေလို့.. အမှိုက်လေး သွန်ပေးပါ " ဆိုတာမျိုး မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့.
ခင်ပွန်းသည် တွေက ဇနီးသည်ရဲ့ တချို့အကျင့်၊
တချို့ လုပ်ရပ် တွေကို မကြိုက်တဲ့ အချက်တွေကတော့ -
၁) ခင်ပွန်း အိမ်ပြန်လာတာတွေ့ပါလျက်
အိမ်နီးချင်းနဲ့ စကားအပြောမပျက် နေတတ်တာမျိုး။
၂) ကိုယ့်တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှုကို ဂရုမစိုက်တတ်တာ။
၃) ခင်ပွန်းဘက်က ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို မလေးစားတာ။
၄) ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို
၅) ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ဆန္ဒကို မသိယောင်ဆောင်
၆) ကာမဆက်ဆံမှုကို စိတ်မပါဟန်ပြတာ။
၇) ခင်ပွန်းကို အရာရာမှာ အပြစ်ပြောတတ်တာ။
၈) အိမ်ထောင်သည်ပဲဆိုပြီး၊ ကိုယ့်ရဲ့ တစ်ကိုယ်ရေ
၉) ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ဝင်ငွေ၊ လခကို အသေးစိတ် စာရင်း
၁၀) သူများအိမ် လည်ဖို့ ဝါသနာကြီးတာ။
၁၁) အိမ်တွင်း အလှအပ သန့်ရှင်းရေးကို စိတ်မဝင်စားတာ။
၁၂) သားသမီးရဲ့ ဝေယျာဝစ္စကို စိတ်မဝင်စားတာ။
၁၃) ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းကို တွယ်တာလွန်းတာ။
၁၄) ယောက္ခမနဲ့ ယောက်မ အကြောင်း ကြံဖန်
၁၅) ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ရုံး၊ လုပ်ငန်းက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်
အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သံသယ ထားတတ်တာ။
၁၆) ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စအတွက် စိတ်ကောက်တတ်တာ။
၁၇) သူစိမ်းတွေ ရှေ့မှာ ယောက်ျားရဲ့ အားနည်းချက်တွေ
၁၈) သူစိမ်း ယောက်ျားတွေ၊ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ယောက်ျားလေး
အပေါင်းအသင်းတွေ အကြောင်းကို စိတ်ဝင်တစား
၁၉) ခင်ပွန်းသည် ဝယ်လာတဲ့ ပစ္စည်းကို အပြစ်ရှာ
၂၀) ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ အဝတ်အစားနဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ
၂၁) ကိစ္စ အသေးအမွှားလေးကို ပုံကြီးချဲ့ စကားများချင်တာ။
၂၂) ဇနီး မောင်နှံ နှစ်ဦးကြား စိတ်ချင်း မတိုက်ဆိုင်တာကို
အကြောင်းပြုပြီး မိဘတွေကို ဆွဲထည့်တတ်တာ။
၂၃) ကိုယ့် မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ ဖုန်းအကြာကြီး
၂၄) ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ မိဘဆွေမျိုးသားချင်း၊ အပေါင်းအသင်း
​တွေကို ကိစ္စတိုင်းမှာ စိတ်မပါ့တပါ ဆက်ဆံတတ်တာ၊
၂၅) အမြဲတမ်းလိုလို ရောဂါတစ်ခုခုကို အကြောင်းပြပြီး
အိမ်အလုပ် မလုပ်ဘဲ ပစ်ထားတတ်တာ။
၂၆) ကိုယ့်အိမ်လာတဲ့ သူတိုင်းကို ခင်ပွန်းသည်အကြောင်း၊
မဟုတ်ကဟုတ်က အတင်းဖန်တီး ပြောတတ်တာ။
၂၇) အိပ်ရာထဲရောက်တာနဲ့ ခင်ပွန်းသည် တစ်နေ့လုံး
လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေကို တန်းစီပြောခိုင်းတာ။
၂၈) ရုံးက မောမောပန်းပန်း ပြန်လာတဲ့ ခင်ပွန်းသည်ကို
၂၉) ကိုယ့်မိဘ အိမ်နဲ့ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ အိမ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး
နှိမ့်ချပြောတတ်တာ မျိုးတွေပါပဲ။ ။
ဇနီးသည်မကြိုက်တဲ့ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ တချို့
၁) ဇနီးသည်က အိမ်လာတဲ့ ဧည့်သည်နဲ့ ရယ်ရယ်မောမော
ဧည့်ခံ စကားပြောတာကို ပြဿနာလုပ်တတ်တာမျိုး။
၂) မိမိရဲ့ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေအပေါ် စိတ်ဝင်တစား
၃) စားတဲ့သောက်တဲ့အခါ အသံမြည်အောင် စားတတ်တာ။
၄) စကားပြောတိုင်း ဆဲရေးတိုင်းထွာတာ၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့
၅) ဆေးလိပ်၊ စီးကရက်သောက်တတ်တာ။
၆) အပေါင်းအသင်းက တိုက်လိုက်လို့ဆိုပြီး၊
အကြောင်းပြ အရက်သေစာ သောက်တတ်တာ။
၇) အဝတ်အစား သေသေသပ်သပ် မဝတ်တတ်တာ။
၈) ဇနီးသည်ရဲ့ မွေးနေ့ကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်
၉) ကလေးတွေကို ဆုံးမတဲ့ အခါတိုင်း လက်ပါတတ်တာ။
၁၀) အိပ်နေတုန်း စကားယောင်ပြောတတ်တာ၊
၁၁) ကိစ္စတိုင်းမှာ မိန်းမကို အပြစ်ရှာတတ်တာ။
၁၂) ဖုန်းဆက်တဲ့အခါ အသံကျယ်ကျယ် ပြောတတ်တာ။
၁၃) အင်္ကျီကို ချွတ်ပြီးရင် အိပ်ရာပေါ်ပစ်တင်
၁၄) ခေါင်းမှာ ဆီရွှဲအောင် လိမ်းတတ်တာ၊ တချို့ကျတော့
ဆီလုံးဝ မလိမ်းဘဲ ဖွာလန်ကြဲ နေတတ်တာ။
၁၅) ကိုယ့်ဇနီးကို ဘယ်ယောက်ျားနဲ့မဆို
၁၆) အစားအသောက်မှာ တစ်ခုခုကို အပြစ်ရှာပြီး
၁၇) တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုကို ဂရုမစိုက်တတ်တာ။
၁၈) ကိုယ့်ရဲ့ ဘယ်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းကိုမဆို
စနစ်တကျ မထားဘဲ ဇနီးသည်ကို လှမ်းလှမ်း
၁၉) အိမ်တွင်းရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်နေရာမဆို
ဇနီးသည်ကို ဖက်လဲတကင်း လုပ်တတ်တာ။
၂၀) ဟင်းမကောင်းတဲ့အခါ ထမင်းပန်းကန်ကို
၂၁) အိမ်မှာ အခမ်းအနား တစ်ခုခုလုပ်လို့ ဧည့်သည်တွေ
ရောက်ချိန်ကိုတောင် မထောက်ဘဲ အကြောင်း တစ်ခု
ခုကြောင့် ဆူညံပူညံ လုပ်တတ်တာ။
၂၂) ဇနီးသည်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ယောက်ျားတွေရဲ့
၂၃) အကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် ဇနီးသည်ရဲ့
၂၄) ဆွေမျိုးသားချင်း (သို့မဟုတ်) အပေါင်းအသင်း
စုံတဲ့အခါ ဇနီးသည်ကို ရှာကြံပြီး အပြစ်ပြောတတ်တာ၊
၂၅) အိမ်အပြင် ထွက်တော့မယ်ဆိုရင် ဇနီးသည်ကို
ကိုယ့်အကြိုက် အဝတ်အစား ဝတ်ဖို့ တိုက်တွန်း
၂၆) လူစိမ်းတစ်ယောက်ယောက် အိမ်လာတာတွေ့တာနဲ့
ဇနီးသည်ကို ဘုမသိ ဘမသိ သံသယမျက်လုံးနဲ့
၂၇) ဇနီးမောင်နှံ အတူနေကြတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိစ္စပြီးတာနဲ့
တစ်ဖက်လှည့်သွားပြီး ဇနီးနဲ့ကိုယ် ဘာမှ မဆိုင်သလို
၂၈) ကိုယ့်ရဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုတည်းကိုသာကြည့်ပြီး ဇနီးသည်ရဲ့
စိတ်အခြေအနေကို လုံးဝ ထည့်မတွက်တတ်တာ။
ခင်ပွန်းသည်မှာ ဖြစ်စေ အထက်ပါ
အကျင့်လေးတွေရှိခဲ့ရင် သတိလက်လွတ် မနေဘဲ
ပြု ပြင်လိုက်ရင်တော့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ရေး ပိုပြီး
အဆင်ပြေ သာယာ ပျော်ရွှင်လာမှာ အမှန်ပါပဲ။
အိမ်ထောင်ပြုကြမဲ့ အမျိုးကောင်းသား အမျိုးကောင်းသ္မီးတွေ
ကြိုတင်ညှိနိုင်းပြီး တိုင်ပင်ထားမယ် ၊ လျှော့သင့်တာလျှော့ ညှိသင့်တာ ညှိ စတဲ့ adjustment တွေ လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် သာယာစိုပြည်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ရရှိမှာ ဧကန် မုချပါပဲ။
(၁). အနာရောဂါကင်းရှင်းပြီး အနေအထိုင်သိမ်မွေ
(၂). မိဘအား ပြုစုလုပ်ကျွေးလိုစိတ်ရှိပြီး ကိုယ့်ထက်အကြီး
များအား လေးစားစွာ ဆက်ဆံတတ်ပြီး
(၃). ပုံမှန်အားဖြင့် ယောကျာ်းဆို စိတ်မ၀င်စားတတ်..
ကိုယ်နဲ့တွေ့မှ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း လက်ထပ်ခြင်း
အမှုကို စဉ်းစားဖြစ်သော မိန်းမ
(၄). အရာရာကို လွယ်လွယ်မယုံ ဥာဏ်နဲ့ယှဉ်ကာ
သားသမီးများအား သွန်သင် လမ်းညွှန်ပြနိုင်သော မိန်းမ
(၅). ဟိုးအောက်ဆုံးအဆင့်ကနေ ..ဟိုးအမြင့်ဆုံးအထိ ..
ယောကျာ်းဖြစ်သူရဲ့ အလုပ်အကိုင် အဆင့်အတန်း
ရာထူးဂုဏ်ရှိန်ဝါနဲ့ အညီ လိုက်လျောညီစွာ
နေထိုင် ပြုမူတတ်ပြီး .. ဘယ်ဘ၀ရောက်ရောက်
(၆). မာန်မာန မတက်.. ကြွားဝါးလိုခြင်း အလျဉ်းမရှိ..
ရိုးသားဖြူစင်စွာ နေတတ်သော မိန်းမ
(၇). အချက်အပြုတ် အိမ်သန့်ရှင်းရေး ..
မိသားစု ငွေကြေးကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှု သားသမီးများအား
ကြင်နာယူစွာ အုပ်ထိန်းနိုင်မှု ..စသဖြင့် အခြေခံ
မယားဝတ်တရားများအား ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်
(၈). ဘုရား တရား သံဃာ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသော
(၉). အကျိုးမရှိသော စိတ်ပျော်ရွှင်မှုသက်သက် ..
အလေလိုက်ခြင်း .. အချစ်ဝတ္ထုတွေ ဖတ်ခြင်း ..
လိုတာထက်ပို၍ စိတ်ပါဝင်စားမှု မရှိသော မိန်းမ
(၁၀). ကိုယ်တစ်ဦးတည်းသာ အရမ်းချစ်သော မိန်းမ
အိမ်​​ထောင်​​ရေး သုခ သာယာ​အေးချမ်းနားလည်​နိုင်​ကြပါ​စေ
အမှန်​​ပြော အမုန်းခံ Moe Min (Mye Bon)
Posted by Alex Aung at 1:15 AM No comments: